Radar အကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်..... [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Radar အကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်.....
View Full Version : Radar အကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်.....
radar အကြောင်းစုံစုံလင်လင်သိချင်လို့ ပါ......ကူညီကြပါအုံးနော်
seminar တင်ရမှာမို့ လို့ ပါ........help me!
seminar ဖတ်ဖို့လောက်အထိ ဘယ်လိုဆွေးနွေးမှာလဲဗျာ..။ ရေဒါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က နယ်ပယ်အကျယ်ကြီးကိုး။ လုပ်မယ့် ခေါင်းစဉ်လေးချပြရင်
တော့ သိတဲ့သူများက ကူညီနိုင်ကောင်းရဲ့..။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ။ ကိုအံ့မင်းညိုပြောတာ။ လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုလောက်ရွေးလိုက်ရင်
ကောင်းမယ်ဗျို့ ။ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သိသလောက်တတ်သလောက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဒ်လေးမှာရေဒါနဲ့ပတ်သတ်လို့ သိချင်တာလေးများဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
စာတမ်းဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ လမ်းကြောင်းလေးရွေးပေးမှဖြစ်မယ်ခင်ဗျ။ http://mmradar.mmgenius.com/
ကဲကဲ အားလုံးက တောင်းဆိုနေကြပြီး။ လမ်းကြောင်းချဖို့ဘဲကျန်တော့တယ်။ မြန်မြန်ချကြပါဗျာ။ ;D
ကျွန်တော်လည်း ရေဒါကို စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာရင်း ရေဒါနယ်ထဲကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတယ်။ စတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာ မိမိနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲ များစွာကြုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ့လာနေတာလည်း အပေါ်ယံပါးပါးလေးတွေပါ။ အခုလည်း IFF အကြောင်းအကြမ်းဖျဉ်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ လေ့လာခဲ့သမျှ ရေဒါဆိုင်ရာဗဟုသုတ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေကိုဆက်လက်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေဒါနဲ့ အစိမ်းသက်သက်တွေအတွက် မိတ်ဆက်သဘောမျိုးလေး ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ ပြီးတော့ ရေဒါအမျိုးအစားများနဲ့ ရေဒါအခြေခံ သဘောတရားများ တို့ကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ဖိုရမ်မှာလည်း ရေဒါနယ်ပယ်ထဲက ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကအခုမှ စလုံးရေစ လုပ်နေရတုန်းပါ။ လိုအပ်တာတွေ၊ မှားယွင်းတာတွေ ဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း လက်တွဲခေါ်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ရေဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ ဖန်တစ်ရာတေနေတဲ့ အသိအမြင်ကိုပဲ ထုံးစံအတိုင်းဆွေးနွေးရင်း အစပျိုးလိုက်ပါတယ်။ Radar ဆိုတာ Radio Detection and Ranging ဆိုတဲ့စကားစုရဲ့ အတိုကောက်စကားလုံးပါပဲ။ ရှေးဦးရေဒါတွေကတော့ အဝေးကချဉ်းကပ်လာတဲ့ လေယာဉ်တွေကို ဖမ်းယူနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ရေဒါတွေဟာ Electromagnetic Spectrum ဖြစ်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကို အသုံးပြုပြီး အရာဝတ္ထုများ၊ လေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ လူများနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာများကို ဖမ်းယူခြေရာခံခြင်း၊ အချက်အလက်များ တိုင်းတာရယူခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရေဒါတွေကို မြေပြင်၊ ရေပြင်တို့၌သာမက ဝေဟင်မှာပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ရေဒါတွေဟာ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အကွာအဝေး (Range)၊ အမြင့် (Altitude)၊ ညွှန်းရပ် (Azimuth/Bearing)၊ အလျင်နှုန်း (Speed) စသည်တို့ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ခွဲခြားမှုပြုလုပ်ပေးခြင်း (Identification) နဲ့ ခြေရာခံခြင်း (Tracking) တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။ ရေဒါတွေဟာ အဝေးက လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေတဲ့ သေးငယ်သောပစ်မှတ် တွေကိုဖမ်းယူရာမှာ နေ့ညကန့်သတ်ချက်၊ ရာသီဥတု ကန့်သတ်ချက် တွေနဲ့ မြင်ကွင်းကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်လွန်ပြီး ဖမ်းယူခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ရေဒါစနစ်တစ်ခုမှာ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ Antenna, Transmitter, Receiver နဲ့ Signal Processor တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Signal Processor ဟာ Receiver နဲ့ တွဲဆက်တည်ဆောက်ထားပေမဲ့ ၄င်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ တစ်သီးတစ်ခြားဖြစ်တဲ့ အတွက် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်တဲ့ Plot Extractor, data formatter, display, monitoring, control equipment များနဲ့ special-purpose equipment များဖြစ်တဲ့ heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) တို့ကိုတော့ ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရေဒါစနစ်တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း များကို အောက်ပါပုံမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အရပ်ဘက်ရဲ့ လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်း ထိန်းသိမ်းလမ်းညွှန်မှုတို့မှာ ရေဒါတွေကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပေမဲ့ ရေဒါအသုံးပြုမှုမြင့်မားလာခြင်းနဲ့ ရေဒါနည်းပညာ တိုးတက် ဖွံဖြိုးလာခြင်းတို့ဟာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ရေဒါအားအသုံးပြုမှုအပေါ်မှာများစွာ မူတည်ပါတယ်။ ရေဒါတွေကို အသုံးချတဲ့နယ်ပယ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Air Traffic Control (ATC)
လေကြောင်းပျံသန်းမှုထိန်းသိမ်းရေးရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်များအချင်းချင်း လမ်းကြောင်းရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ တပ်ဆင် အသုံးချမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Ground Control Approach System
ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်တွေ ဆင်းသက်လို့ရအောင် လမ်းကြောင်း ပြပေးဖို့အတွက် ဒီရေဒါအမျိုးအစားများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
၃။ Radar Altimeters
၄။ Weather Avoidance Radars
မုန်တိုင်းတွေလိုမျိုး ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုတွေကရှောင်ရှားနိုင်စေရန် လမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့ နေရာမှာ ၄င်းရေဒါအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
၅။ Ship Safety
ရေကြောင်းသွားလာရေးတွေမှာ သင်္ဘောအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိဘဲ အန္တရယ် ကင်းစွာ သွားလာနိုင်စေရန် လမ်းကြောင်းပြသဖို့လည်း ရေဒါတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဒီရေဒါမျိုးဟာ မြင်ကွင်းမရှင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။
၆။ Highway Police
ယာဉ်တွေရဲ့ သွားလာမောင်းနှင်တဲ့ အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာရာမှာလည်း ရေဒါတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
၁။ Remote Sensing
၄င်းနယ်ပယ်မှာ ပင်လယ်တွေရဲ့ အခြေအနေများ၊ ရေအရင်းအမြစ်များ၊ ရေခဲများဖုံးလွှမ်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောတည်ရှိမှုအခြေအနေ၊ မြေမျက်နှာပြင် အနေအထားများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် မြေပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ ၄င်းရေဒါအမျိုးအစားများဟာ ဂြိုလ်တုများနဲ့ လေယာဉ်များ ပေါ်မှာလည်း တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
အာကာသယာဉ်တွေဟာလည်း အာကာသထဲမှာ ယာဉ်တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ချိတ်ဆက်တဲ့ အခါနဲ့ ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်ဆင်းသက်တဲ့ အခါမှာရေဒါတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ အချို့သော ကြီးမားတဲ့ မြေပြင်အခြေစိုက်ရေဒါတွေဟာ ဂြိုလ်တုတွေကို ဖမ်းယူခြေရာခံဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
၃။ Meteorology and Astronomy
ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ နက္ခတ်ဗေဒ စူးစမ်းလေ့လာရေး နယ်ပယ်တွေမှာလည်း ရေဒါတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာတော့ ရေဒါတွေကို ဝေဟင်စောင့်ကြည့်ကင်းထောက်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေး၊ လမ်းညွှန်ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်များနဲ့ ပစ်ခတ်မှုထိန်းသိမ်းရေး စသည့် နယ်ပယ်တို့မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖိုရမ်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြာ အဆက်ပြတ်ရပြန်ပါတယ်။ အလုပ်ကတစ်ဖက်ရှိတာရယ်၊ အလုပ်ရှုပ်နေတာရယ်၊ အလုပ်မှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ အခြေအနေမရှိတာရယ်တို့ကတော့ အဓိကအကြောင်းအချက်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း IFF အကြောင်းစဆွေးနွေးဖြစ်ရာကနေ အခုတဖြည်းဖြည်း အလှမ်းကျယ်သွားပါတယ်။ ရေဒါနယ်ပယ်ကလည်း တကယ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သွားမယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်အများကြီးပေးပြီးလေ့လာမှဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဗဟုသုတရစေဖို့လောက်ပဲရည်ရွယ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆွေးနွေးထား တာပါ။ နောက်ပိုင်းဒီနယ်ပယ်ထဲက ညီအစ်ကိုတွေများလာရင်လည်း စည်စည်ကားကားဆွေးနွေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့။ အခုဆက်လက်ပြီး ရေဒါအမျိုးမျိုး အကြောင်းကို အကြမ်းသဘောဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ အချိန်ရရင်ရသလိုပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးချက်များမှာ မှားယွင်းနေတာတွေ၊ လိုအပ်နေတာတွေရှိရင်လည်း ဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးပြင်ဆင်ပေးသွားကြပါလို့ လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းပါတယ်။
ရေဒါအမျိုးအစားခွဲခြားရာမှာ စံနှုန်းအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားမှုပြုကြပါတယ်။
-ရေဒါ Signal ထုတ်လွှတ်ရာအရင်းအမြစ်ပေါ် မူတည်ပြီးခွဲခြားမယ်ဆိုရင် Primary Radar နဲ့ Secondary Radar ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-ရေဒါ Signal ထုတ်လွှတ်မှု သဘောသဘာဝပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တော့ Active Radar, Passive Radar နဲ့ Semi-active Radar စသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် Short-range Radar, Medium-range Radar, Long-range Radar နဲ့ Over-the-horizon Radar (OTH Radar) စသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-ရေဒါလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုနည်းလမ်းပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တော့ Pulse Modulated Radar, Continuous Wave Radar (CW Radar) နဲ့ Frequency Modulated CW Radar (FMCW Radar) ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-Receiving နဲ့ Transmitting Antenna များရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တော့ Mono-static Radar နဲ့ Multi-static Radar ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-ရေဒါတပ်ဆင်ထားရာနေရာပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တော့ Airborne Radar, Naval Radar နဲ့ Land-based Radar စသဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-ထုတ်လွှင့်တဲ့ frequency ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် Meter Band Radar, Centimeter Band Radar, X-Band Radar, Ku-Band Radar စသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ရေဒါအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်မှုများကို အကြမ်းဖျဉ်းမိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ အသေးစိတ်သွားရင်တော့ ခွဲခြားမှုအမျိုးအစားများစွာ ကျန်ရှိပါသေးတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီး ရေဒါအမျိုးအစားတွေတစ်ခုချင်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ အက္ခရာစဉ်အတိုင်းပဲ ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
(၁) Above-the-horizon Radar
၄င်းရေဒါအမျိုးအစားကို ရေပြင်ညီအနေအထားရဲ့ အထက်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုများအားဖမ်းယူရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ ရေပြင်ညီရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖမ်းယူခြင်းမပြုပါဘူး။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားမှာ ရေဒါအများစုပါဝင်တဲ့အတွက် over-the-horizon နဲ့ subsurface ရေဒါအမျိုးအစားများနဲ့ ခွဲခြားပြောဆိုလိုတဲ့ အခါမျိုးမှတပါး သာမန်အားဖြင့် အသုံးပြုခြင်းမရှိပါဘူး။
(၂) Acquisition Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေမှာ အများအားဖြင့်အသုံးပြုပြီး လေယာဉ်ပစ်အမြောက်စနစ်များ၊ လေယာဉ်ပစ်ဒုံးစနစ်များနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသလို သီးခြားရေဒါစနစ်အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ ညွှန်းရပ် ၃၆၀ ဒီဂရီအတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းမှု ပြုပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ 2D (2 Dimensional) ဒါမှမဟုတ် 3D (3 Dimensional) ရေဒါအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။ 2D ရေဒါတွေက အကွာအဝေးနဲ့ ညွှန်းရပ်တို့ကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး 3D ရေဒါတွေကတော့ အကွာအဝေး၊ ညွှန်းရပ်နဲ့ အမြင့်တို့ကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ 2D ရေဒါတွေကိုပဲ အမြင့်ရှာရေဒါတွေနဲ့တွဲဖက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Acquisition Radar တွေကနေ ရှာဖွေထောက်လှမ်းပေးနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ အရာဝတ္ထုရဲ့ ညွှန်းရပ် (azimuth/bearing)၊ အကွာအဝေး (range)၊ အမြင့် (altitude) ဒါမှမဟုတ် မြင့်ထောင့် (elevation) တို့အပြင် အရာဝတ္ထုရဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့ အလျင်နှုန်း (speed) ကိုပါ တိုင်းတာဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲများ ဒါမှမဟုတ် သင်္ဘောများမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ရေဒါတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲ ရေဒါအများပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ရေဒါတစ်ခုက အနိမ့်ပျံပစ်မှတ်တွေကို ရှာဖွေဖမ်းယူပေးပြီး နောက်တစ်ခုက အလယ်အလတ်နဲ့ အနိမ့်ပျံပစ်မှတ်တွေကို ရှာဖွေဖမ်းယူပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ အလိုအလျောက်ဖမ်းယူခြင်းကို လုပ်ဆောင်သလို အထက်ဌာန ဒါမှမဟုတ် တာဝေးထောက်လှမ်းဖမ်းယူမှုရေဒါများမှ ပေးပို့တဲ့ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံပြီးတော့လည်း ဖမ်းယူခြေရာခံမှု ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ဒီရေဒါအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Aerial target acquisition radar များဟာ အခြေချ ဒါမှမဟုတ် ရွေ့လျားရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါများရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ ဝေးကွာတဲ့ အကွာအဝေးများအထိဖမ်းယူနိုင်ဖို့နဲ့ အမြင့်ပျံပစ်မှတ်များကို ဖမ်းယူနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် Acquisition Radar များမှာ အလိုအလျောက်ရှာဖွေဖမ်းယူမှုစနစ်နဲ့ အလိုလျောက်ခြေရာခံခြင်းစနစ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Acquisition Radar တွေကို လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန တွေမှာလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါကတော့Acquisition Radar တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ AN/FPS-7 ရေဒါဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့Acquisition Radar တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ AN/TPS-59 ရေဒါဖြစ်ပါတယ်
(၃) Active Radar
Active Radar ဆိုတာကတော့ သာမန်အားဖြင့် ရေဒါလှိုင်း လွှင့်ထုတ်မှုနဲ့ ဖမ်းယူမှုတို့ကို ရေဒါတစ်ခုထဲက ပဲလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Primary Radar လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ Active Radar Missile Seeker ကတော့ ဒုံးထဲမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပုံကတော့ Active Radar တွေနဲ့ တူပါတယ်။ ၎င်းမှာ Transmitter ပါရှိပြီး ပထမဦးစွာပစ်မှတ်ဆီသို့ ရေဒါလှိုင်းထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ ၎င်းနောက်ပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းကိုအခြေခံပြီး ပစ်မှတ်ဆီသို့ ဒုံးပျံသန်းနိုင်စေရန်လမ်းညွှန်မှုပေးပါတယ်။ Active Radar Missile Seeker များကို ဝေဟင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံး၊ ဝေဟင်မှမြေပြင်ပစ်ဒုံး၊ မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးနဲ့ မြေပြင်မှမြေပြင်ပစ်ဒုံး စသည်တို့မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Semi-active Radar Missile Seeker ကတော့ ရေဒါလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုကို အခြားရေဒါတစ်ခုမှ ပြုလုပ်ပေးပြီး ပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းကိုသာဖမ်းယူခြေရာခံတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Passive Radar Missile Seeker ကတော့ ပစ်မှတ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့ လှိုင်းကိုသာ အာရုံခံပြီး ဦးတည်ပျံသန်းတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဒါလှိုင်းစီးဒုံးစနစ်နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ ၎င်းစနစ်နှစ်ခုမှာတော့ Transmitter မပါရှိဘဲ Receiver များသာပါရှိပါတယ်။ အောက်ပါပုံများမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Active Radar Missile Seeker
Semi-active Radar Missile Seeker
Passive Radar Missile Seeker
(၄) Adaptive Radar
Adaptive Radar ကတော့ ရေဒါဖမ်းယူမှုအခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အခါမှာ ထိရောက်စွာဖမ်းယူနိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိစေရန် အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေမှာ Adaptive Antenna Array တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ပစ်မှတ်အားဖမ်းယူနေချိန်နဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက် တွက်ချက်နေချိန်တွေမှာ ပစ်မှတ်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ ကြားဖြတ်အနှောင့်အယှက်များ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ တည်နေရာနှင့် အရေအတွက်များ စသည်တို့ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖမ်းယူတွက်ချက်ရာမှာ မှားယွင်း လစ်ဟာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ Adaptive Radar တွေပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Aerostat Radar
Aerostat Radar တွေကတော့ မိုးပျံပူဖောင်းတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အနိမ့်ပျံနဲ့ မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကို ဖမ်းယူရာမှာ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ရေဒါအတွက် power ထောက်ပံ့မှုနဲ့ အချက်အလက်ပေးပို့မှုတို့ကို cable ကြိုးများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေကို လက်တွေ့အသုံးပြုရာမှာ တော့ ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဟာ နယ်စပ်ဒေသထောက်လှမ်းရေး မှာတော့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါကတော့ Aerostat LTA (Lighter Than Air) အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒီပုံကတော့ Aerostat ထောက်လှမ်းရေးရေဒါစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
(၆) Airborne Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားမှာ လေထဲမှာ ပျံသန်းနေတဲ့ ယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် Active Radar Missile Seeker နဲ့ Aerostat Radar တို့ကိုလည်း ဒီရေဒါအမျိုးအစားထဲ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အဝေးထိန်းစနစ်သုံးယာဉ်များ (Remotely Pilot Vehicle / RPV) ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါအားလုံးကိုလည်း ဒီအမျိုးအစားထဲ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လို့ရပေမဲ့ Airborne Radar အများစုကတော့ မောင်းသူရှိတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာပဲ တပ်ဆင်ထားကြပါတယ်။ ခရီးသည်တင် လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်အများစုတွေမှာ ရာသီဥတုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန် Airborne Weather Radar များတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံအများစုရဲ့ လေတပ်တွေမှာတော့ Airborne Early Warning Radar (AEW) တွေတပ်ဆင်ထားပြီး မိမိနိုင်ငံရဲ့ မြေပြင်ပိုင်နက်၊ ဝေဟင်ပိုင်နက်၊ ရေပြင်ပိုင်နက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ ထောက်လှမ်းရှာဖွေကြပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများမှာ UHF ကနေ S-band အထိ frequency ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာတော့ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေးရေဒါ Airborne Intercept Radar (AI) တွေကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ဒုံးလမ်းညွှန်ထိန်းကြောင်းမှု စနစ်တွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းရေဒါတွေမှာတော့ အများအားဖြင့် X-band ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အခြားစစ်ဘက်သုံး Airborne Radar တွေကတော့ Terrain-following Radar နဲ့ Tail-warning Radar တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပထမရေဒါအမျိုးအစားက ရန်သူ့လေကြောင်းပိုင်နက်ထဲကို ရာသီဥတုမရွေး အနိမ့်ပျံထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ကို ဆင်နွှဲနိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အမျိုးအစားကတော့ ရန်သူ့နောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်များကို လမ်းညွှန်မှုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားကို ထပ်မံခွဲခြားမှုများစွာ ပြုလုပ်ထားပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် မ၀င်ဖြစ်တာကြာနေပြီ
ဒီနေ့မှ ၀င်ဖြစ်လို့ အခု အစ်ကိုတင်ထားတာလေး
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်တို့ ပိုစ့်တွေမတင်အားဘူးဗျာ
အခုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ Airborne Radar ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားတွေပါပဲ။
-Airborne Early Warning (AEW) Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်၊ ဒါမှမဟုတ် အာကာသယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိပြီး မိမိလေကြောင်းပိုင်နက်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ လေယာဉ်များကို ဖမ်းယူထောက်လှမ်းရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ လေယာဉ်တင် AEW ရေဒါအမျိုးအစားများကတော့ ယေဘူယျအားဖြင့် လေယာဉ်နဲ့ curise missiles များကိုသာဖမ်းယူရန် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်ပေါ် လေယာဉ်တင် AEW တွေကတော့ လေယာဉ်နဲ့ curise missiles တွေအပြင် သင်္ဘောများ၊ မြေပြင်နှင့်ရေပြင်အခြေပြု ballistic missiles များနဲ့ အခြားသော မြေပြင်ပစ်မှတ် မြောက်မြားစွာကိုလည်း ဖမ်းယူထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ AEW ရေဒါတွေရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကတော့ အသုံးပြုမယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခြေပြုတပ်ဆင်မယ့်ယာဉ်အမျိုးအစားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံများကတော့ AEW ရေဒါအမျိုးအစားများဖြစ်ကြတဲ့ Airborne Early Warning And Control System (AWACS) နဲ့ E-2C Hawkeye လေယာဉ်တင်ရေဒါများဖြစ်ကြပါတယ်။
-Airborne Interceptor (AI) Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ fighter, interceptor စတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ရန်သူ့လေယာဉ်များကို ဖမ်းယူခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းတိုိ့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများမှပစ်မှတ်အချက်အလက် တိုင်းတာရယူရာမှာ ပစ်ခတ်မှုထိန်းသိမ်းရေး (fire control) စနစ်များနဲ့ပါ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရေဒါမှရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး တိုက်ခိုက်မယ့်ပစ်မှတ်အပေါ် သင့်တော်တဲ့ လက်နက်နဲ့ ပစ်ခတ်ရမယ့် အကွာ အဝေးတို့ကို ရွေးချယ် အကြံပြုပေးတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ AI ရေဒါနဲ့ fire control ကွန်ပျူတာတို့ ပူးပေါင်း တွက်ချက်ပြီး မည်သည့်ဒုံး သို့မဟုတ် အမြောက်နဲ့ ဘယ်အချိန်မှာပစ်ခတ်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြတာပါ။
AI ရေဒါအများစုဟာ X band ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့နိုင်မှုနဲ့ ရေဒါအရွယ်အစားတို့အပေါ်မူတည်ပြီး ရာသီဥတုမရွေးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေရရှိနိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ AN/APG-63 ရေဒါဟာ F-15 တိုက်လေယာဉ်တွေမှာတပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ AI ရေဒါ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါရဲ့ Air-to-Air ဖမ်းယူမှတွေမှာ track-while-scan (TWS), range-while-search (RWS), single-target track (SST), super-search inahead-up display reference နဲ့ vertical acquisition စတဲ့ modes တွေကို auto ဒါမှမဟုတ် manual အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Air-to-Ground ဖမ်းယူမှုတွေမှာတော့ real-beam mapping, doppler beam-sharpening ground-mapping, air-to-surface ranging, fixed and moving ground-target track စတဲ့ modes တွေပါဝင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကတော့ F16 တိုက်လေယာဉ်ထိပ်ဖူး အတွင်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ AN/APG-66 AI ရေဒါဖြစ်ပါတယ်။
AN/APG-66 AI ရေဒါ
-Airborne Mapping Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ မြေပုံပြုလုပ်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ မြေပုံအသုံးပြုတဲ့ စစ်နည်းဗျူဟာလေယာဉ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ လေယာဉ်တင် ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာအဓိကအားဖြင့် real-beam mapping နဲ့ synthetic array mapping ဆိုပြီးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ real-beam mapping မှာ ညွှန်းရပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ရေဒါရဲ့ beam width ကကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်တင်နာ ညွှန်းရပ်ရဲ့ beam width ဟာ အသုံးပြုတဲ့ wavelength နဲ့ အင်တင်နာရဲ့ အကျယ်တို့နဲ့ အချိုးကျဆက်သွယ်နေလို့ပါပဲ။ မြင့်မားတဲ့ ညွှန်းရပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းရည် ကို ရှည်လျားတဲ့ အင်တင်နာတွေနဲ့ တိုတောင်းတဲ့ wavelength ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ wavelength အနေနဲ့ X-band နဲ့ ၎င်းထက်နိမ့်တဲ့လှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး အင်တင်နာရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ ရေဒါတပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ ယာဉ်ရဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၅မီတာရှည်လျားတဲ့ X-band, side looking, real-beam array antenna ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ၁၀ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ သင်္ဘောလေးတွေရဲ့ ညွှန်းရပ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ synthetic array mapping နည်းလမ်းကိုတော့ မြေပြင်မြေပုံလမ်းကြောင်း ဖော်ထုတ်ရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၎င်းနည်းလမ်းဟာ real-beam mapping နည်းလမ်းထက် ညွှန်းရပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်တင်နာမှရေဒါလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုဟာ ရေဒါတပ်ဆင်ထားတဲ့ လေယာဉ်ရဲ့ မျဉ်ဖြောင့်ရွေ့လျားမှုပေါ်မှာ မူတည်နေလို့ပါပဲ။ အထက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးမှာ pulse compression techniques ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ညွှန်းရပ်ဖော်ထုတ်တွက်ချက်မှုစွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Airborne Weather-avoidance Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရာသီဥတုတိုင်းတာရေးရေဒါဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသော ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေ၊ tactical airborne radar မတပ်ဆင်ရသေးတဲ့ စစ်လေယာဉ်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်အတော်များများမှာ ဒီရေဒါတွေကိုတပ်ဆင်ထားကြပါတယ်။ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်အများစုရဲ့ Airborne Weather-avoidance Radar တွေမှာတော့ C-band ကိုအသုံးပြုကြပြီး ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေနဲ့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ် အသေးစားတစ်ချို့မှာတော့ တပ်ဆင်ရမယ့်နေရာနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့် စွမ်းအား အကန့်အသတ်တို့ကြောင့် X-band ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ digital X-band weather-avoidance radar တွေရဲ့ အလေးချိန်ဟာ ပေါင် ၅၀ ထက်မများပါဘူး။ 28V, 4A DC power ကိုသာလိုအပ်ပြီး display နဲ့ control အစိတ်အပိုင်များပါဝင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကနေ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်အသေးစားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိတဲ့ Weather-avoidance Radar ရဲ့ အင်တင်နာနဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
- Aircraft Tail-protection Radar
ဒီရေဒါများကိုတော့ လေယာဉ်တွေရဲ့ နောက်မြီးပိုင်းတွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၎င်းမှမိမိလေယာဉ်နောက်ပိုင်းကို ရန်သူ့လေယာဉ်များနဲ့ ဒုံးများတိုက်ခိုက်လာမှုကို လေယာဉ်အဖွဲ့သားတွေ သိရှိစေဖို့နဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းစစ်ကစားမှုနဲ့ လက်နက်များအသင့်ဖြစ်မှု အခြေအနေတိုိ့ကို တိုင်းတာဖော်ပြနိုင်စေရန် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေဟာ သတိပေးမှုစနစ်နဲ့အတူ လက်နက်စနစ်အချို့ကို အစပြုလှုပ်ရှားစေခြင်းဖြင့် တန်ပြန်တိုက်ခို်က်စေနိုင်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၎င်းဟာ airborne fire control ဒါမှမဟုတ် airborne intercept (AI) radar တို့နဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ရှေးဦးဗုံးကြဲလေယာဉ်အမျိုးအစားတစ်ချို့မှာ ရေဒါထိန်းကျောင်းလက်နက်စနစ် (စက်သေနတ်များ) ကို လေယာဉ်နောက်ပိုင်းမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ ပေမဲ့လည်း ခေတ်ပေါ်လေယာဉ်များမှာတော့ နောက်ပိုင်းဧရိယာကာကွယ်ရေးအတွက် passive warning receivers တွေကို ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာနဲ့ လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်မှုစွမ်းရည်များနဲ့ပါ ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
ဒီလိုကိုယ့်ဘာသာစကား ၊ စာ နဲ့ဖတ်ရတာ အရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ရုရှလိုလေ့လာရတာ ဘာသာစကားကခံနေတော့
တော်တော်နဲ့ကိုခရီးကမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခုလိုဖိုရမ်းထဲမှာ မြန်မာလိုလေး
လေ့လာခွင့်ရလို့ အစ်ကိုနဲ့တကွ ဖိုရမ် admin များကိုပါကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ .. ကျွန်တော်ကလည်းရေဒါကိုအခုမှ စလေ့လာဖြစ်တာပါ...အခုလည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာရင်း ဖတ်မှတ်မိသမျှပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသမျှထဲမှာ အမှားပါရင်လည်း အားမနာတမ်းပြင်ဆင်ဆွေးနွေးပေးပါ.. ဒါမှလည်းဖိုရမ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း အသက်ဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ပိုင်းရေဒါရဲ့သဘောတရားတွေဆက်ဆွေးနွေးရင်တော့ လက်တွေ့လေ့လာသင်ယူနေတဲ့ ကိုဟိန်းညီတို့ကိုပဲအားကိုးရမှာပါ.. ကျွန်တော်တို့လည်းသိသလောက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပေမဲ့ အမှားတွေပါလာရင် မသိတဲ့သူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရိ်ှပါတယ်..ဒါကြောင့်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်တောင်းဆိုပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ရေဒါနယ်ပယ်ကလူအင်အားနည်းပါတယ်..ဒါကြောင့် အချင်းချင်းစည်းစည်းလုံးလုံးဆွေးနွေးရင်း အတူတကွလေ့လာကြမှဖြစ်မှာပါ.. တတ်နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေကြတာပေါ့ဗျာ..
(၇) Air Defense Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်လာတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစားပေးရှာဖွေထောက်လှမ်းမှု ပြုတဲ့ ပစ်မှတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ဒီရေဒါတွေကို နှစ်မျိုးထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။ လေထုအတွင်းမှပျံသန်းတိုက်ခိုက်တဲ့ လေယာဉ်တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ အနိမ့်ပျံစစ်နည်းဗျူဟာတိုက်ခိုက်ရေးဒုံးတွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားကို လေကြောင်းပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးရေဒါ လို့ခေါ်ပြီး အာကာသယာဉ်များနဲ့ Ballistic Missile တွေကိုရှာဖွေထောက်လှမ်းတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားကိုတော့ အာကာသပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးရေဒါ လို့ခေါ်ပါတယ်။
လေကြောင်းပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးရေဒါတွေကတော့ 2-Dimension Radar ၊ 3-Dimension Radar ၊ အမြင့်ရှာရေဒါနဲ့ Firing Control Radar အမျိုးအစားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးရေဒါတွေကို အမျိုးအစား ခွဲခြားရမယ်ဆိုရင် ကြိုတင်သတိပေးရေဒါစနစ်များ၊ Ballistic Missile ကာကွယ်ရေးရေဒါများနဲ့ အာကာသယာဉ်ခြေရာခံထောက်လှမ်းရေးရေဒါများ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြိုတင်သတိပေးရေဒါစနစ်များဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Above-the-horizon Radar နဲ့ Over-the-horizon Radar စနစ်များအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အာကာသပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးရေဒါများဟာ ရေဒါနည်းပညာရဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ စွမ်းရည်များအားလုံးကို အသုံးပြုထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ဆုံးရေဒါအမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ ရှုပ်ထွေးများပြားလှတဲ့ နှောင့်ယှက်လှိုင်းများနဲ့ ရေဒါပုံရိပ်ယောင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအများဆုံးအခြေအနေရှိတဲ့ အခါမှာတောင်မှ အလွန်ဝေးကွာတဲ့ပစ်မှတ်များကို တိကျစွာဖမ်းယူနိုင်မှုရှိပါတယ်။
(၈) Airport Surface Detection Equipment (ASDE) Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ မြေပြင်အခြေစိုက်ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာတပ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းမှာရှိတဲ့ လေယာဉ်နဲ့ အခြားယာဉ်များရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် Ku, K နဲ့ Ka Band များကို အသုံးပြုပြီး pulse ကျဉ်းကျဉ်း (20 to 50 ns)၊ beam width ကျဉ်းကျဉ်း (0.25° to 0.4°) နဲ့ လည်ပတ်နှုန်းမြန်မြန် (60 rpm နဲ့ ၎င်းထက်ပို၍) ရှိပြီး အကွာအဝေးအားဖြင့် ၁ ကီလိုမီတာမှ ၅ ကီလိုမီတာအထိ ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံဖော်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကလည်း လေယာဉ်အမျိုးအစား အလိုက် တစ်စီးချင်း ခွဲခြားမှုပြုနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်ရပါတယ်။ ဒါမှသာ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့ လေယာဉ်များနဲ့ ပြေးလမ်းသို့ ဝင်ရောက်ရာ လမ်းများပေါ်မှာရှိတဲ့ လေယာဉ်များအားခွဲခြားထိန်ချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ကွင်းအတွင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်များနဲ့ ထရပ်ကားများကိုလည်း ရေဒါမှခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ADSE-3 ရဲ့ အချက်အလက်များကို အောက်ပါဇယားမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၉) Airport Surveillance Radar (ASR)
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာတပ်ဆင်ထားလေ့ရှိတဲ့ လေကြောင်းပျံသန်းမှုထောက်လှမ်းရေးရေဒါမျိုးဖြစ်ပြီး Medium-range Surveillance Radar များကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ASR ရေဒါတွေဟာ အကွာအဝေး ၇၀ မှ ၁၀၀ ကီလိုမီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ လေယာဉ်ငယ်လေးတွေအထိ ထောက်လှမ်းဖမ်းယူနိုင်ပြီး scan period ကတော့ ၄ စက္ကန့်ကနေ ၅ စက္ကန့်အထိရှိပါတယ်။ S-band ကိုအသုံးပြုပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ ညွှန်းရပ်နဲ့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ Secondary Surveillance Radar (SSR) တွေကို ASR ရေဒါတွေရဲ့ လှည့်ပတ်ဖမ်းယူမှုပြုတဲ့ အင်တင်နာ reflector တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒီရေဒါအမျိုးအစားနဲ့ အခြားရေဒါများကြားကွာခြားတဲ့ ဝိသေသတွေကတော့ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့အကွာအဝေး၊ ပုံဖော်နိုင်မှုစွမ်းရည်၊ အချက်အလက် လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုစွမ်းရည်၊ ရာသီဥတုနဲ့ မြေပြင်အနှောင့်အယှက်များ ဖယ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းရည်၊ လှည့်ပတ် ဖမ်းယူနေစဉ်အတွင်း ပစ်မှတ်အချက်အလက်များစွာကို တွက်ထုတ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ASR ရေဒါတွေရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကတော့ ASR-10SS ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းတို့နဲ့အတူ ရိုးရှင်းသော ပုံစံကို အခြေခံပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသုံးပြုမောင်းနှင်ခြင်းနဲ့ အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းတို့မှာလည်း သက်သာလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒီရေဒါရဲ့ Transmitter မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ amplifier အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါပုံများကတော့ ၁၉၈၀ ခန့်မှာဖွံဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ထုတ် ASR-9 ရေဒါနဲ့ ခေတ်ပေါ် ASR-10SS ရေဒါတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ASR ရေဒါတွေရဲ့ အချက်အလက်များကို အောက်ပါဇယားမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) Air-Route-Surveillance Radar (ARSR)
၎င်းရေဒါအမျိုးအစားများဟာ ASR ရေဒါတွေရဲ့ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပြင်ပမှာရှိတဲ့ လေယာဉ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Long-Range Surveillance Radar တွေကို တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေဟာ L-band ကိုအသုံးပြုပြီး scan period ၁၀ စက္ကန့်ကနေ ၁၂ စက္ကန့်အထိရှိကာ ညွှန်းရပ်နဲ့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Secondary Surveillance Radar (SSR) တွေကို ARSR ရေဒါတွေရဲ့ လှည့်ပတ်ဖမ်းယူမှုပြုတဲ့ အင်တင်နာ reflector တွေပေါ်မှာပဲ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေရဲ့ အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကတော့ မြေပြင်နှင့် ရာသီဥတု အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ ပစ်မှတ်အများအပြားကို ဖမ်းယူဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Alenia ATCR-22 ရေဒါတွေဟာ ARSR ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ နှစ်များအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ်။ ARSR-4 ကတော့ ခေတ်ပေါ် ARSR ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကပဲ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တာဝေး2Dimensional အချက်အလက်တွေရှာဖွေဖို့ အသုံးပြုသလို တိုက်ချင်းပစ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအတွက်3Dimensional အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေဖို့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် ARSR ရေဒါအမျိုးအစားကတော့ Raytheon ASR-23SS ဖြစ်ပါတယ်။ ATCR-22 ရေဒါနဲ့ ASR-23SS ရေဒါတို့ရဲ့ အခြေခံအချက်အလက်များကို အောက်ပါဇယားမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၁၁) Air(craft) search radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နယ်ပယ်အတွင်းကို ဝင်ရောက်လာတဲ့လေယာဉ်များအား ဖမ်းယူနိုင်ရန်အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေရဲ့ အဓိကတာဝန်ကတော့ ပစ်မှတ်လေယာဉ်များကို စောလျင်စွာဖမ်းယူနိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းယူရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ရဲ့ တည်နေရာကို တွက်ချက်တိုင်းတာခြင်းနဲ့ ၎င်းပစ်မှတ်အားခြေရာခံဖမ်းယူခြင်းတို့ကိုတော့ Surveillance Radar တွေကလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကနေ အဓိကဖမ်းယူရတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကတော့ လေယာဉ်တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာ့လေထုရဲ့ troposphere နဲ့ stratosphere အလွှာအတွင်းပျံသန်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ဒုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေကို အရပ်ဘက်သုံးအနေနဲ့ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွေမှာ အသုံးပြုပြီး စစ်ဘက်သုံးမှာတော့ ကြိုတင်သတိပေးစနစ်များ၊ ပစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လှမ်းရေးစနစ်များ၊ မြေပြင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေး စနစ်များနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ကွင်းတွေ၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေမှာ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးအနေနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ စစ်ဘက်နဲ့ အရပ်ဘက်တွဲဖက်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ASR နဲ့ ARSR ရေဒါတွေကလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
(၁၂) Air Surveillance Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပစ်မှတ်လေယာဉ်တွေကိုရှာဖွေခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနဲ့ အချက်အလက်များ တိုင်းတာဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ဒီရေဒါတွေဟာ ဖမ်းယူထောက်လှမ်းမိတဲ့ ပစ်မှတ်အခြေအနေကို ဖော်ပြခြင်း၊ ဖမ်းယူခြေရာခံမှုအခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
(၁၃) Air traffic control (ATC) radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ လေယာဉ်ကွင်းတွေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွေကို လေယာဉ်များရဲ့ တည်နေရာအချက်အလက်များ ပေးပို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးရေဒါအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Primary နဲ့ Secondary Surveillance Radar နှစ်မျိုးစလုံးကို ဒီရေဒါတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၁၄) All-around-looking radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ ညွှန်းရပ် ၃၆၀ ဒီဂရီကို လှည့်ပတ်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) Artillery fire control radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ ပစ်မှတ်ရဲ့သွားလာမှုလမ်းကြောင်းနဲ့ အမြောက်ကျည်ဆံပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးပြီး အမြောက်ပစ်ခတ်မှုအား ထိန်းသိမ်းညွှန်ကြာပေးဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါတွေဟာ အကွာအဝေးနဲ့ ထောင့်တိုင်းတာမှုမြင့်မားပြီး ဝေဟင်ပစ်မှတ်များ၊ မြေပြင်အခြေစိုက်ပစ်မှတ်များနဲ့ ရေကြောင်းပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ထိန်းသိမ်းညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ အလိုအလျောက်ဖမ်းယူထိန်းချုပ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။
(၁၆) Artillery and mortar location radar
၎င်းရေဒါများဟာ မြေပြင်အခြေစိုက် စစ်နည်းဗျူဟာတိုက်ပွဲဝင်ရေဒါများ ဖြစ်ကြပြီး အမြောက်များ၊ ဒုံးကျည်များနဲ့ စိန်ပြောင်းများပစ်ခတ်မှုကို ညွှန်ပြရန် အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းဟာ phased array နဲ့ frequency scanning နည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုပြီး မြေပြင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပစ်ခတ်မှုများကိုထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ AN/TPQ-36 နဲ့ 37 “Firefinder” ရေဒါတွေဟာ ဒီရေဒါအမျိုးအစားများဖြစ်ကြပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ X-band, three-dimensional, pulsed doppler, range-gated radars များဖြစ်ကြပြီး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ AN/TPQ-36 ရေဒါများဟာ ညွှန်းရပ်ရှာဖွေရာမှာ phase scan ကိုအသုံးပြုပြီး နိမ့်မြင့် (elevation) ရှာဖွေရာမှာတော့ frequency scan ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ AN/TPQ-37 ရေဒါများကတော့ dimension နှစ်ခုလုံးအတွက် phased array နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။
စောင့်ကြည့်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကို ထောက်လှမ်းဖမ်းယူခြင်း၊ စီစစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနဲ့ ပျံသန်းချဉ်းကပ်မှုလမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းတို့ကို ရေဒါနှစ်မျိုးစလုံးက အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုများထွက်ပေါ်လာရာ လမ်းကြောင်းတစ်လျောက်ကိုပြန်လည်ခြေရာခံ တွက်ချက်ပေးပြီး ပစ်ခတ်မှုစတင်ရာနေရာများကို ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်ကာ တန်ပြန်ပစ်ခတ်မှုပြုနိုင်ဖို့အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ရေဒါတစ်ခုဟာ ညွှန်းရပ် ၉၀ ဒီဂရီရှိတဲ့ အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို တာဝန်ယူထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းအပိုင်းအခြားဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပစ်ခတ်မှုနေရာ ၄၀ ခန့်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ AN/TPQ-36 ရေဒါတွေဟာ အရှေ့ဘက် ၄ ကီလိုမီတာအထိထောက်လှမ်းပေးပြီး စိန်ပြောင်းများနဲ့ အနီးပစ်အမြောက်များကို စောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်။ AN/TPQ-37 ရေဒါများကတော့ ဒီထက်ပိုဝေးဝေးထောက်လှမ်းနိုင်ပြီး အဝေးပစ်အမြောက်များနဲ့ ဒုံးကျည်များကိုပါထောက်လှမ်း စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(၁၇) Automobile radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ စစ်ယာဉ်တန်းများသွားလာလှုပ်ရှားနေချိန်မှာ မတော်တဆမှုများနဲ့ နောက်ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ယာဉ်တန်းရဲ့သွားလာမှုအရှိန်နှုန်း(ယာဉ်တစ်စီးနှင့်တစ်စီးအကွာအဝေး) တွေကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များရဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ငုပ်လျှိုးစနစ်တစ်ခုအဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်စသည်တို့အတွက် မော်တော်ယာဉ်များမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအာစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို ဆက်တိုက်လှိုင်းထုတ်လွှင့်မှု (continuous emission) နဲ့ ပြတ်တောင်းလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှု (pulse emission) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဆက်တိုက်လှိုင်းသုံးရေဒါတွေမှာ FM လှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး အကွာအဝေး၊ အလျင်နှုန်းနဲ့ ချဉ်းကပ်ပစ်မှတ်များကို ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ယာဉ်တင် ပြတ်တောင်းလှိုင်းလွှင့်ရေဒါတွေကတော့ nanosecond duration pulses တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီး အနီးကပ်ပစ်မှတ်တွေကို ထောက်လှမ်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကြီးမားမှုနဲ့ အသုံးပြုနည်းပါးမှုတို့ကြောင့်် Automobile radar တွေဟာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါဘူး။
(၁၈) Automated radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ အော်ပရေတာမှ ပစ်မှတ်များကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ပေးရပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ပစ်မှတ်များကို ခြေရာခံခြင်း၊ တည်နေရာတိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ရေဒါက အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
(၁၉) Automatic Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ ပစ်မှတ်များအားရှာဖွေခြင်း၊ ပစ်မှတ်အားခြေရာခံခြင်း၊ ပစ်မှတ်တည်နေရာတိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်း၊ ရေဒါအချက်အလက်များရယူပေးပို့ခြင်းတို့ကို ကွန်ပျူတာများဖြင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်တဲ့ ရေဒါများဖြစ်ပါတယ်။ ရေဒါအော်ပရေတာများရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ ရေဒါစနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပစ်မှတ်အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များပေးပို့ရယူခြင်းဟု ဆိုရာမှာ ပစ်မှတ်တည်နေရာနဲ့ အရေအတွက်တို့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပစ်မှတ်လှုပ်ရှားရာသွားလာမှုဆိုင်ရာအချက်အလက် ရယူခြင်း၊ ပစ်မှတ်ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (အလျင်နှုန်း၊ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းစသည်) တို့ကိုတွက်ချက်ပေးခြင်းတိုို့ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ရေဒါအများစုဟာ Automatic Radar အမျိုးအစားများဖြစ်ကြပါတယ်။
(၂၀) Bistatic Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကိုတော့ Transmitter နဲ့ Receiver တို့ကိုသင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုအထိ ခွဲခြားထားရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ Bistatic ရေဒါကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ Narrow-angle Bistatic Radarဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်လှိုင်းနဲ့ ဖမ်းယူလှိုင်းတို့ဟာ ပစ်မှတ်နဲ့ ၄၅ ဒီဂရီထက်နည်းတဲ့ ထောင့်အတွင်း သွားရောက်ပေါင်းဆုံပါတယ်။ ၎င်းရေဒါအမျိုးအစားမှာ ထုတ်လွှင့်မှုနဲ့ ဖမ်းယူမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Wide-angle Bistatic Radar ဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်လှိုင်းနဲ့ ဖမ်းယူလှိုင်းတို့ဟာ ပစ်မှတ်နဲ့ ၄၅ ဒီဂရီမှ ၁၈၀ ဒီဂရီအတွင်း ပေါင်းဆုံပါတယ်။
Bistatic Radar တွေဟာ တာဝေးနဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းလွန်အကွာအဝေး ကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းရာမှာ အသုံးပြုလာတဲ့အထိ ဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ AN/FPS-118 ရေဒါတွေဟာ High frequency (HF) band ရဲ့5to 28 MHz အပိုင်းရှိတဲ့ frequency ကိုအသုံးပြုထားပြီး Transmitter နဲ့ Receiver တို့ကို ၂၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိ ထားရှိပါတယ်။ သာမန်အသုံးပြုချိန်မှာဆိုရင် AN/FPS-118 ရေဒါတွေဟာ ညွှန်းရပ် ၆၀ ဒီဂရီရှိတဲ့ အရပ်မျက်နှာအပိုင်းတစ်ခုအတွင်း ၈၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိ စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါစနစ်ဟာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အကွာအဝေးပိုမိုထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့အပြင် အနိမ့်ပျံ cruise missile တွေကိုပါ ဖမ်းယူလာနိုင်ပါတယ်။ အကွာအဝေးကို ၃၀၀၀ ကီလိုမီတာအထိ ဖမ်းယူနိုင်တယ်လို့ နောက်ဆုံးသရုပ်ပြမှုတွေအရ သိရှိရပါတယ်။
(၂၁) Carrier-controlled Approach (CCA) Radar
လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်လာတဲ့ လေယာဉ်တွေကို ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းနဲ့ လမ်းညွှန်မှုပေးပြီး ညွှန်ကြားခြင်းအားဖြင့် အချက်အလက်တွေ ပေးပို့ရယူပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဟာ Ground-controlled Approach (GCA) ရေဒါများနဲ့ သဘောသဘာဝအားဖြင့်တူညီပြီး ဒီရေဒါတွေက မြေပြင်အစား သင်္ဘောကုန်းပတ်ကို လေယာဉ်ဒါမှမဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြေးလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ၎င်းနေရာမှပဲ ဖမ်းယူထိန်းချုပ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေမှာ S, X, Ku နဲ့ Ka-band တွေကိုအသုံးပြုပြီး မြေပြင်အခြေစိုက် Airport Surveillance Radar (ASR) တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဥပဒေသတွေမှာ တူညီပါတယ်။
CCA ရေဒါတွေကတော့ အမေရိကန်ထုတ် AN/SPN-6 နဲ့ AN/SPN-43 S-band surveillance ရေဒါများ၊ AN/SPN-35 (X-band) ရေဒါ၊ AN/SPN-41 (Ku-band) ရေဒါနဲ့ AN/SPN-42 (Ka-band) precision approach radar တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ AN/SPN-44 speed-detecting radar ကတော့ X-band CW Doppler radar ဖြစ်ပြီး ချဉ်းကပ်မှုအလျင်နှုန်းအချက်အလက်တွေကို လေယာဉ်ဆင်းသက်မှုအချက်ပြ အရာရှိထံပေးပို့ပေးပါတယ်။
AN/SPN-43 S-band CCA ရေဒါ
(၂၂) Chain Radar
၎င်းဟာ ဒုံးပျံများကဲ့သို့သော တာဝေးပျံသန်းရေးယာဉ်များရဲ့ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ပျံသန်းမှုတွေကို ဆက်တိုက်ခြေရာခံဖမ်းယူဖို့ ပျံသန်းမယ့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ တပ်ဆင်နေရာချထားတဲ့ ရေဒါအစိတ်အပိုင်း အစုအဝေးများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု တစ်လျှောက်လုံးကို station တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှ ဆက်တိုက်ဖမ်းယူမှု ပြုလုပ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို တာဝေးပျံသန်းတဲ့ယာဉ်များရဲ့ စမ်းသပ်မှုအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်။
Chain Radar စနစ်အလုပ်လုပ်ပုံ
Chain Radar Transmitter များ
(၂၃) Close-in Radar
ဒီရေဒါတွေကို တာနီးဖမ်းယူမှုတွေအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများကို အခြားရေဒါများရဲ့ တည်ဆောက်ပုံသဘောတရားအတိုင်း တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး active နဲ့ passive နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Close-in Radar တွေဟာ အသုံးပြုတဲ့ signal အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး pulse ၊ continuous နဲ့ doppler ရေဒါအမျိုးအစားထဲက တစ်မျိုးမျိုးအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားရေဒါများနဲ့ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ အင်တင်နာကနေ ရေဒါလှိုင်းများလွှင့်ထုတ်ဖမ်းယူမှုပြုတဲ့ အကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ အဓိကအားဖြင့် close-in radiation zone အတွင်းမှာပဲ လှိုင်းထုတ်လွှင့်ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်ပါတယ်။ အခြားကွာခြားချက်တွေကတော့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ရေဒါလှိုင်းနဲ့ ပြန်လည်ဖမ်းယူရရှိတဲ့ ပဲ့တင်လှိုင်းတို့ရဲ့ စွမ်းအားပမာဏနဲ့ ကာလအပိုင်းအခြား၊ ပေးအပ်တဲ့အမိန့်ရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ signal processor အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အလျင်နှုန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Close-in Radar တွေကို သင်္ဘောကမ်းကပ်ခြင်းနဲ့ လေယာဉ်များဆင်းသက်ခြင်းတို့ကဲသို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များရဲ့ လုံခြုံဘေးကင်းမှုအတွက် လည်းကောင်း၊ အနိမ့်ပျံလေယာဉ်များအား ထောက်လှမ်းရာမှာလည်းကောင်း၊ တိုက်ခိုက်မှုသတိပေးအချက်ပြကိရိယာ များမှာလည်းကောင်း ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Close-in Radar စနစ်တပ်ဆင်ထားသော Mk-15 Phalanx လက်နက်စနစ်
(၂၄) Coastal Radar
၎င်းရေဒါများဟာ ကမ်းခြေအနီးမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Coastal Radar တွေဟာ အခြေစိုက်ရေဒါနဲ့ ရွေ့လျားရေဒါစနစ်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများဟာ နည်းဗျူဟာချမှတ်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ရွေ့လျားနဲ့ လေကြောင်းပစ်မှတ် ထောက်လှမ်းရေးရေဒါများ၊ ပစ်ခတ်မှုထိန်းသိမ်းရေးရေဒါများ၊ လမ်းညွှန်ထိန်းကြောင်းမှုရေဒါများ၊ ခွဲခြားစီစစ်ရေးရေဒါများ စသဖြင့် တာဝန်အမျိုးမျိုးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Coastal Radar များ
(၂၅) Coherent radar
Coherent radar ဟာ Coherent Signal နဲ့ Signal Processing တွေကို အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Coherent ရေဒါတွေဟာ signal-to-noise ratio အချိုးအစားကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ပစ်မှတ်ရဲ့ radial velocity ကိုတိုင်းတာပေးခြင်းနဲ့ MTI (Moving Target Indicator) နဲ့ အခြားသော doppler-based clutter rejection နည်းလမ်းများကို ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Coherent Pulse Radar တွေဟာအသုံးအများဆုံး Coherent Radar အမျိုးအစားများဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒုံးပစ်ခတ်မှု ထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်ခြင်း၊ ရဲလုပ်ငန်းသုံး အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုရေဒါစတဲ့ သီးခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေအတွင် Coherent Continuous Wave Radar တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Coherent Pulse Radar တွေကို Coherent နဲ့ coherent-on receive လို့သိထားကြတဲ့ pseudocoherent ဆိုပြီး အမျိုးအစားနှစ်ခုထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။
JY30 C-band Fully-Coherent Pulse Doppler Weather Radar
(၂၆) Collision-warning [-avoidance] radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကိုတော့ မြေပြင်၊ ရေကြောင်းနဲ့ လေကြောင်းမှာ သွားလာနေတဲ့ ယာဉ်အမျိုးမျိုးကို အနီးအနားမှာသွားလာနေတဲ့ အခြားယာဉ်များနဲ့ မတော်တဆ တိုက်ခိုက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေရန် ထိန်းသိမ်းလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းကြောင်းသွားလာနေတဲ့ ယာဉ်များအတွက် short-range millimeter-wave radar နည်းပညာများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရေကြောင်းသွားလာမှုမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ မတော်တဆတိုက်ခိုက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် conventional navigation နဲ့ surface search ရေဒါများမှ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ ကွန်ပျူတာများနဲ့ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ အော်ပရေတာများကသတိပေး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လေကြောင်းသွားလာရေး မတော်တဆတိုက်ခိုက်မှု သတိပေးစနစ်များကတော့ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး စနစ်များမှ လေယာဉ်လမ်းကြောင်းများ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲပေးနိုင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်မှာရှိတဲ့ secondary surveillance radars (SSRs) တွေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်ရှိ transponder များမှအပြန်အလှန်ပေးပို့တဲ့ signal များ ဒါမှမဟုတ် collision-avoidance systems (CAS) တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ သတိပေးရှောင်ရှားမှုများပြုလုပ်စေပါတယ်။
(၂၇) Conical-scan Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ pencil-beam tracking radar အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ tracking axis ပေါ်ရှိ small cone centered အတွင်းမှ beam axis ရဲ့ လှည့်ပတ်မှုအပေါ်မှာမူတည်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Conical-scan Radar ဖမ်းယူလှည့်ပတ်မှုပုံစံ
လေ့လာနိုင်မှုနဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မှုကိုလေးစားမိပါတယ်..။ :)
ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် အင်တာနက်မသုံးဖြစ်လို့ ဖိုရမ်ထဲမရောက်နိုင်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ ဒီနေ့မှရောက်လာမိတော့အတော်အံ့သြသွားတယ်...အဆင်အပြင်ကအစအတော်ပြောင်းလဲလှပလို့။ ဆွေးနွေးချက်အသစ်တွေလည်း ဆန်းသစ်လတ်ဆတ်လို့။ ကျွန်တော့် ရေးလက်စ ဆွေးနွေးချက်လေးကတော့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ဆက်မရေးဖြစ်သေးဘူး။ တကူးတက လာရောက်ဖတ်ရှုအားပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေရှိနေတာသိရလို့အားတက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကွက်လပ်လေးတွေဖြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ ဖိုရမ်အတွက်ဒီထက်မက ပေးဆပ်ချင်ပါသေးတယ်။ အဆက်ပြတ်သွားတဲ့ အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်အပတ်တွေကျမှပဲဆက်ဆွေးနွေးပေးသွားပါ့မယ်။ (ကျွန်တော်က တစ်ပတ်မှ တစ်ခါလောက် အလူးအလဲသုံးနေရလို့ပါဗျာ.. နားလည်ပေးကြပါ :4:)
(၂၈) Conical-scan-on-receive-only Radar
ဒီရေဒါများကလည်း pencil-beam tracking radar အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါရဲ့ လွှင့်ထုတ်လှိုင်းဟာ tracking axis ရဲ့ အလယ်မှာသွားစုဆုံပြီး ဖမ်းယူလှိုင်းကတော့ conical scan အတိုင်းလှည့်ပတ်ဖမ်းယူပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ AM jamming နည်းလမ်းနဲ့ ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၉) Continuous-wave (CW) Radar
ဒီရေဒါအမျိုးအစားကတော့ ဆက်တိုက်လှိုင်းများကို ထုတ်လွှင့်ဖမ်းယူမှုပြုတဲ့ ရေဒါများဖြစ်ပါတယ်။ ပြတ်တောင်းလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှု ရေဒါများရဲ့ အနီးကပ်ပစ်မှတ်များကို ဖမ်းယူမှုမပြုနိုင်တဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် ဒီရေဒါတွေထွက်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ CW Radar တွေကို အနိမ့်ပျံပစ်မှတ်များအား ထောက်လှမ်းဖမ်းယူရေး၊ ခြေရာခံရေးနဲ့ semi active ရေဒါထိန်းကြောင်းလက်နက်များမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီရေဒါများဟာ Doppler သဘောတရားအပေါ်အခြေခံ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (a) ဟာ unmodulated CW Radar ရဲ့ block diagram ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (b) ကတော့ amplifier ရဲ့ frequency response ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်။
CW Radar များကို အောက်ပါအတိုင်းထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။
- Frequency Modulated CW Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ လွှင့်ထုတ်လှိုင်းတွေကို frequency modulated ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံမှာ FM CW radar ranging ပြုလုပ်ပုံကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-Interrupted CW Radar
ဒီရေဒါကတော့ high duty factor ကိုအသုံးပြုတဲ့ Coherent Pulsed Doppler Radar တွေကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီရေဒါတွေနဲ့ တခြား Doppler Radar တွေရဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ Echo signal တွေကို ဖမ်းယူရာမှာနဲ့ processing ပြုလုပ်ရာမှာ single range gate ကို အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
-Multi Frequency CW Radar
ဒီရေဒါကတော့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ frequency များကိုအသုံးပြုပြီး ထုတ်လွှင့် ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီက ရရှိလာတဲ့ signal တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး အကွာအဝေးကို တိုင်းတာတွက်ချက်ပါတယ်။
(၃၀) Counter battery Radar
ဒီရေဒါများကတော့ ဒုံး၊ စိန်ပြောင်းနဲ့ အမြောက်စခန်းတည်နေရာများ၊ ၎င်းတို့၏ပစ်ခတ်ပျံသန်းမှု လမ်းကြောင်းများနဲ့ ဦးတည်ရာများ၊ ပစ်ခတ်မှုနေရာများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ထောက်လှမ်းပုံဖော်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်နှောင့်ယှက်လှိုင်းများကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Doppler စနစ်နဲ့ ရွေ့လျားပစ်မှတ် ပုံဖော်ရေးစနစ်တို့ကို ဒီရေဒါများမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
(၃၁) Doppler Radar
ဒီရေဒါများကတော့ Doppler Effect ကိုအသုံးပြုပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အလျင်နှုန်းကို တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ သတ်မှတ်အလျင်နှုန်းရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းထပ်မံခွဲခြားထားပါသေးတယ်။
ဒီရေဒါတွေကတော့ လေယာဉ်တင်ရေဒါ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေမှာ Doppler Effect ကိုအသုံးပြုပြီး beam သုံးခုခန့်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ beam တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုကိုတော့ မြေမျက်နှာပြင်အခြေအနေအလိုက် လေယာဉ်ရဲ့ အလျင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုတန်ဖိုးအပေါ်မူတည်ပြီး လေယာဉ်ကို မူလနေရာမှမည်မျှကွာဝေးသည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း ညွှန်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီရေဒါတွေကတော့ Doppler Spectrum တွေကိုအသုံးပြုပြီး ရာသီဥတုခန့်မှန်း ဖော်ပြပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါများကို မြေပြင်အခြေစိုက်ရေဒါ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်တင်ရေဒါအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကာ လုံခြုံဘေးကင်းစွာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ Nexrad ရေဒါဟာ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေ သတိပေးခြင်းနဲ့ မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ လေကြောင်းပျံသန်းမှု လုံခြုံဘေးကင်းရေးအတွက်လည်း ခေတ်ပေါ်လေယာဉ်အများစုမှာ ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေကို တပ်ဆင်ထားရှိပါတယ်။
(၃၂) Early-Warning Radar
ဒီရေဒါများကတော့ ကြိုတင်သတိပေးစနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မိမိနယ်မြေအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရန်သူ့လေယာဉ်တွေကို စောလျင်စွာ ဖမ်းယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေရဲ့တာဝန်ကို air surveillance၊ ground သို့မဟုတ် air-controlled intercept နဲ့ target acquisition ရေဒါများကပါ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃၃) Electronic Scanning Radar
ဒီရေဒါများကတော့ Electronic Scanning နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး ထောက်လှမ်းရှာဖွေမှု ပြုလုပ်တဲ့ ရေဒါများဖြစ်ပါတယ်။ Scanning ဆိုတာကတော့ အင်တင်နာ beam တွေက လေထုထဲလှည့်ပတ်ပြီး ထောက်လှမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Electronic Scanning မှာတော့ အင်တင်နာလည်ပတ်မှုမပြုဘဲ လှည့်ပတ်ထောက်လှမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Electronic Scanning လုပ်ခြင်းမှာ amplitude electronic scanning, frequency electronic scanning နဲ့ phase electronic scanning ဆိုပြီးတော့ နည်းလမ်းများထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ရေဒါအများစုမှာ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရေဒါစနစ်တွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုပါတယ်။ AN/TPS-59, W-2000, AN/FPS-108, AN/FPS-115 နဲ့ AN/FPS-85 ရေဒါတွေမှာ Electronic Scanning ကို အသုံးပြုပါတယ်။
ုကို William Paul ခင်ဗျာ....
အစ်ကို့ပို့စ်ထဲမှာ FM-CW ranging technique ဆိုတာကိုတွေ့ပါတယ်။
ပုံကိုကြည့်တော့ system တစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်သင်ဖူးပါတယ်။
ဒါမဲ့ အဲလိုခေါ်မှန်းမသိဘူးအစ်ကိုရ။ FM-CW ကိုအရှည်လေးပြောစေချင်ပါတယ်။
အစ်ကို့ပို့စ်တွေဖတ်ပြီး တော်တော်ဗဟုသုတရတယ်ဗျာ။ တကယ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
မသိတာတွေအများကြီးသိရတယ်။ အားပေးတယ်ဗျာ။ ဆက်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း
တတ်နိုင်သလောက်တော့လုပ်တာပဲ။ ဒါမဲ့ ကျောင်းစာအပြင်တခြားစာတွေကျ
Radio range finders
Radar system တစ်ခုမှာ target ရှိမရှိဆိုတာသိရုံနဲ့ မလုံလောက် သေးပါဘူး။ အဲဒီ target ရဲ့ အကွာအဝေး ၊ အလျင် ၊ ထောင့် စတာတွေကိုအတိအကျတိုင်းတာ ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒီ target ရဲ့ တည်နေရာ ၊ လုပ်ဆောင်မှု နဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုတိတိကျကျပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းအပိုင်း ကနေ စတင်ရအောင်။
radio range finder ဆိုတာ radio နည်းပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ reflected signal ရဲ့ time delay ကနေ target အထိအကွာအဝေးကို တိုင်းတာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေခံဖော်မြူလာလေးကနေတွက်ထုတ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်မြူလာ လေးက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ signal တစ်ခုကိုလွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေ ပြန်မိတဲ့ အချိန်ကြားက time taken လေးကိုတွက်ထားတာပါ။ signal ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင် အသွားကောအပြန်ကောလိုတာမို့ 2R ဖြစ်နေတာပါ။ R က ကျွန်တော်တို့ ရေဒါနဲ့ target ကြားကအကွာအဝေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုဝေ့ဖ်တွေဟာ အလင်းအလျင် နီးပါးနဲ့ သွားတာမို့ c နဲ့ပြန်စားထားတာပါ။ ဒီတော့ ဒီဖော်မြူလာလေးမှာ reflected signal ရဲ့ time delay ကိုသာသိရင်ကျွန်တော်တို့ range ( R ) ကိုသိပြီပေါ့ဗျာ။ ဒီလို time delay ကိုရှာတဲ့အခါ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်အောက်ပါအတိုင်း radio range finders များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
၁။ frequency radio range finders ၊
၂။ phase radio range finders ၊
၃။ impulse radio range finders ၊
၄။ radio range finders with complex signals ။
ဒီ range finders တွေကို ကျွန်တော်အချိန်ရရင် ရသလို ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
frequency radio range finders
ဒီ system ဟာ linear frequency modulation ကို အခြေခံပြီး စဉ်းစားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပေမယ့် တော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ linear frequency modulation မှာ frequency ဟာ တသတ်မှတ်တည်းမဟုတ်ပဲ တောက်လျောက်ကျချင်ကျသွားမယ် ၊ တက်ချက်တက်လာမယ်ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပုံ (၁-က) မှာလိုပေါ့။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ properties လေးကို အခြေခံထားပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့ signal ဟာ တစ်သတ်မှတ်ထဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် ( linear frequency modulation မဟုတ်ခဲ့ရင် ) ခုလို frequency နှစ်ခုရဲ့ ခြားနားချက်ကို ရှာလို့မရပါဘူး။ ဒါမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ပုံ (၁-က) တုန်းကလို့ signal မျိုးဘယ်လိုမှထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ oscillator ကမထုတ်နိုင်သလို transmitter ၊ receiver တွေမှာလဲ အကန့်အသတ် limitation တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် frequency radio range finders တွေမှာ ပုံ (၁-ခ) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း nonsymmetrical linear frequency modulation ၊ symmetrical linear frequency modulation နဲ့ harmonic linear frequency modulation signal တွေကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်။
frequency radio range finders with nonsymmetrical linear frequency modulation
ကျွန်တော်တို့ ဖမ်းမိတဲ့ signal ဟာ လွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ signal နဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု နောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်။ အဲလို အချိန်တစ်ခု နောက်ကျ ရတာဟာ target ကိုသွားထိပြီး ပြန်လာရတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကြောင်းကို radio range finder အကြောင်းပြောတုန်းက ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲတော့ အဲဒီအချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ range ပါပဲ။ အဲဒီအချိန် ကို frequency နှစ်ခုခြားနားထားတဲ့ beat frequency ( fd ) ကနေတွက်ထုတ်ယူနိုင် ပါတယ်။
ခက်တာက beat frequency က နှစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။ တစ်ခုတက်သွားရင် တစ်ခုကျသွားတယ်။ ဒီလိုဖြစ် နေတော့ td ကလည်းနှစ်ခုဖြစ်နေပြန်ရော။ ပုံ (၂) မှာသေချာကြည့်စေလိုပါတယ်။
အဲတော့ ဘယ် td ကိုရွေးရမလဲဆိုတာပြသနာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ system မှာ Tm≫tdmax ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဆယ်ဆလောက် ပိုကြီးအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ graph နှစ်ခုဖြတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှရလာတဲ့ td ကိုယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ beat frequency ကိုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် range ကိုတွက်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီ system ဟာ ရွေ့နေတဲ့ target တွေရဲ့ range ကိုတော့ရှာလို့မရသေးပါဘူး။ Doppler ဆိုတာကြီးကိုထည့်မစဉ်းစားထား သေးတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်နေတဲ့ target တွေရဲ့ range တွေကိုတော့ တိတိကျကျတွက်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ radar system with symmetrical linear frequency modulation ကျရင်တော့ ရွေ့နေတာကော ငြိမ်နေတာကော အားလုံးရဲ့ range ကိုတိုင်းတာတွက်ထုတ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ရရင်ရသလို ကျွန်တော်တင်ပြ ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။
FM-CW ဆိုတာကတော့ Frequency Modulated Continuous Wave ကိုပြောတာပါ။ အစ်ကိုပြောတဲ့ FM-CW ranging technique ရဲ့ပုံကလည်း David K. Barton နဲ့ Sergey A. Leonov တို့ရဲ့ Radar technology encyclopedia ထဲကနေ ကိုးကားဖော်ပြထားတာပါ။ ကျွန်တော်က ရေဒါအကြောင်းကို စနစ်တကျမသင်ကြားခဲ့ရပါဘူး။ မေဂျာကလည်း Mechanical လေ။ အခုမှရေဒါနယ်ပယ်ထဲ ခုန်ပေါက်ရောက်ရှိပြီး စာလိုက်ဖတ်ဖြစ်တာပါ။ အခုလို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်း အထူးကျေူးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖိုရမ်ထဲမရောက်နိုင်ချိန်မှာ ဆွေးနွေးချက်လေးတွေကို အသက်ဝင်အောင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါဦးဗျာ... ကျွန်တော်လည်းဆက်ဆွေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်..
09-06-2009, 08:38 AM
(၃၆) Fire Control Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ လက်နက်ပစ်ခတ်တဲ့ အခါမှာ ထိန်းကြောင်းညွှန်ကြားဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်တွေကို ခြေရာခံပြီး လေယာဉ်ပစ်အမြောက်များမှပစ်ခတ်နိုင်စေရန် ညွှန်ကြားပေးတဲ့ SCR-584 ရေဒါတွေဟာ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Airborne intercept (AI) ရေဒါများ၊ Surface-to-air Missile (SAM) စနစ်များရဲ့ ခြေရာခံညွှန်ပြရေးရေဒါများနှင့် အချို့သော Multifunction Array ရေဒါများ (MFARS) တို့ကိုလည်း ဒီရေဒါအမျိုးအစားထဲ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
တာဝေးပစ် မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးများကို ထိန်းကြောင်းညွှန်ကြားပေးတဲ့ ပစ်ခတ်မှု ထိန်းသိမ်းရေးရေဒါ (Fire Control Radar) တွေဟာ ၁၉၅၀ ခန့်ကနေ ၁၉၈၀ ကာလအတွင်း အမျိုးအစားနှစ်မျိုးအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ Mechanically Steered, Single-target Mono-pulse Tracker (ဥပမာ Nike Hercules) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Electromechanically Sector-Scanned Tracker (ဥပမာ Fan Song) ဖြစ်ပါတယ်။
Nike Hercules target Tracker တွေအတွက် ရေဒါနှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ပထမရေဒါက ပစ်မှတ်ကိုခြေရာခံပေးပြီး ဒုတိယရေဒါကတော့ ဒုံးသွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံ ပေးပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ရေဒါနှစ်ခုကိုခွဲခြားတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ရာမှာ လွဲမှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာပါပဲ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ အင်တင်နာတစ်ခုထဲကနေ ၎င်းရေဒါနှစ်ခုရဲ့ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။
Nike Hercules target Tracker
Sector-Scanning နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ ရုရှား Fan Song (SA-2) နဲ့ SA-3 မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးတွေရဲ့ ရေဒါတွေမှာတော့ ပစ်မှတ်နဲ့ ဒုံးတို့ကို တူညီတဲ့ အင်တင်နာ scanning beam ကနေ ခြေရာခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ beam တစ်ခုက ညွှန်းရပ်ရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ အမြင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှား [color=maroon]Fan Song ရေဒါ
ပိုမိုအသုံးများတဲ့ ရုရှ မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံး ထိန်းချုပ်ရေးရေဒါအမျိုးအစားကတော့ Multiple-target Phase-array Tracker များဖြစ်ပြီး Space-fed lens arrays တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ Flap Lid ရေဒါများနဲ့ Reflected arrays တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ Top Dome ရေဒါများပဲဖြစ်ပါတယ်။
Flap Lid ရေဒါ
Top Dome ရေဒါ
အခြား Fire Control Radar နမူနာများကတော့ လေယာဉ်ပစ်အမြောက်များနဲ့ တွဲဘက်အသုံးပြုတဲ့ သင်္ဘောတင် Fire control radar set 341 ၊ ယာဉ်တင် 1S91 Fire Control Radar ၊ လေယာဉ်တင် Captor Multimode Airborne Fire Control Radar ၊ ရဟတ်ယာဉ်သုံး AN/APG 78 Longbow Fire Control Radar နဲ့ ရေတပ်သုံး Arabel Fire Control စနစ်တို့ပဲဖြစ်ပြီး အောက်ပါပုံများမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောတင် Fire control radar set 341
ယာဉ်တင် 1S91 Fire Control Radar
လေယာဉ်တင် Captor Multimode Airborne Fire Control Radar
ရဟတ်ယာဉ်သုံး AN/APG 78 Longbow Fire Control Radar
ရေတပ်သုံး Arabel Fire Control စနစ်
(၃၇) Frequency-Agile (FA) Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ Transmitter Carrier frequency တွေကို ၎င်းရဲ့ pulse bandwidth ပမာဏခန့် ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ အနေအထားမျိုးရရှိအောင် pulse တွေထုတ်လွှင့်နေစဉ်မှာ လွှဲပြောင်းထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ pulse ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေရဲ့ Transmitter တွေမှာ Spin-tuned ဒါမှမဟုတ် plunger-tuned ကိုအသုံးပြုတဲ့ Tunable Magnetron များကိုလည်းကောင်း၊ Frequency အရင်းအမြစ်များစွာကိုအသုံးပြု မောင်းနှင်တဲ့ Wideband power amplifier များကိုလည်းကောင်း အသုံးပြုပါတယ်။
(၃၈) Frequency-Diversity (FD) Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ ဟန်ချက်ညီစွာထုတ်လွှတ်နေတဲ့ Carrier Frequency နှစ်မျိုးသို့မဟုတ် နှစ်မျိုးထက်ပိုတဲ့ Frequency တွေကိုတစ်လှည့်စီ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ frequency ရှိတဲ့ pulse အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာ pulse တစ်ခုထုတ်လွှင့်နေစဉ်မှာ ထုတ်ပေးတဲ့ အတွက် receiver တွေမှာ wide band receiver front end များကိုအသုံးပြုဖမ်းယူရပါတယ်။
(၃၉) Gap-Filler Radar
မြေပြင်အခြေစိုက် လေကြောင်းရန်ကွယ်ရေး ကွန်ယက်တစ်ခုအတွင်းမှာတပ်ဖြန့် တည်ရှိနေကြတဲ့ အခြေစိုက်နှင့် လှုပ်ရှားရေဒါများရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ နယ်မြေများအကြား လစ်ဟာနေတဲ့ နေရာများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒီရေဒါတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန့်အကွာအဝေးမှာ ထားရှိတဲ့ ရှာဖွေရေးရေဒါနှစ်ခုဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းရှိတဲ့ အမြင့်နဲ့ အကွာအဝေးကို လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ နယ်မြေအချင်းချင်းတောင်ထပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေပြင်အနေအထားဖုံးကွယ်မှု၊ အမြင့်တူညီတဲ့အခြေအနေမရှိခြင်းဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံး ကြောင့်ပဲ အနိမ့်ပျံပစ်မှတ်တွေကို ဖမ်းယူရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွင်း လစ်ဟာမှု များ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ low altitude gap-filler radar တွေ ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလာကြရပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သေးငယ်တဲ့ လစ် ဟာမှုများအတွက် ကြီးမားတဲ့ ရေဒါတွေမလိုအပ်ပဲ စရိတ်စက သက်သာစွာ ဖြေရှင်းဖြည့်ဆည်း နိုင်ပါတယ်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် Giraffe ရေဒါတွေဟာ C-band, pulsed doppler low-altitude search-and-acquisition radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအများစုမှာ Gap-Filler Radar များ အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် Giraffe ရေဒါ
(၄၀) Geographical Research Radar
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေသုတေသန ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို ရာသီဥတုမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ကို ထောက်လှမ်းတိုင်းတာခြင်း၊ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် နိုင်ရန်အတွက် နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေမှုများ၊ သစ်တောများနဲ့ စိုက်ပျိုးသီးနှံများရဲ့ အခြေအနေတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ရေခဲပြင်ဖုံးလွှမ်းမှုနဲ့ ရေခဲတုံးများရဲ့ အရွယ်အစားကိုလည်း ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှမ်းပြီး ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်နိုင်မှု တွေကိုပါ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီရေဒါများအဖြစ် အများဆုံး အသုံးပြုကြတာကတော့ earth-surface-scanning radars များပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄၁) Ground Attack Radar
လေယာဉ်တင် ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မြေပြင်မှာရပ်တည်နေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ရွေ့လျားနေတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို ဗုံးများ၊ ဒုံးများ၊ လေယာဉ်တင် စက်သေနတ်နဲ့ အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ လေယာဉ်ရှေ့ထိပ်ဖူးမှာတပ်ဆင်ထားလေ့ရှိပြီး သာမန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပိုင်းအခြားအတွင်း ရှာဖွေဖမ်းယူမှုပြုလုပ်ပေးပြီး လေယာဉ်ရှေ့မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို မြင့်မားတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Ground Attack Radar
09-20-2009, 08:24 AM
(၄၂) Ground-Control Approach (GCA) Radar
မြေပြင်သို့ဆင်းတက်ရန် ချဉ်းကပ်လာတဲ့လေယာဉ်ကို မြေပြင်ရှိရေဒါစခန်းမှ ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ အချက်အလက်ပေးပို့ကူညီပေးတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါ စနစ်မှာ Precision Approach Radar (PAR) နဲ့ Airport Surveillance Radar (ASR) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ASR ဆိုတာကတော့ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး Air Traffic Control (ATC) ရေဒါများနဲ့ သဘောသဘာဝခြင်းတူညီပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ PAR တွေကို အရပ်ဘက် ATC တွေမှာ အသုံးပြုခြင်းမရှိပါဘူး။ စစ်ဘက်လေတပ်စခန်းတွေမှာတော့ Instrument Landing System (ILS) တွေကို အစားထိုးဖို့ သုံးစွဲကြပါတယ်။
QUAD GCA RADAR
(၄၃) Ground-Control Intercept (GCI) Radar
လေထုအတွင်းမှာရှိတဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးကို အခြားလေယာဉ်တစ်စီးမှ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက် နိုင်ရန်အတွက် မြေပြင်ရေဒါစခန်းမှ လမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင် ဒီရေဒါအမျိုးအစားတွေက တာဝေးဖမ်း သုံးဘက်မြင် (3 Dimensional) ရေဒါများဖြစ်ပြီး လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် လေတပ်နဲ့ တွဲဘက်လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အကယ်၍ နှစ်ဘက်မြင် (2 Dimensional) ရေဒါကို အသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရန်ညွှန်ပြဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ်မှတ်လေယာဉ်ရဲ့ အမြင့်ကိုရရှိစေရန် အမြင့်ရှာရေဒါများနဲ့ တွဲဘက်အသုံးပြု ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄၄) Ground-Mapping Radar (Ground-Target-Detection Radar)
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ရဲ့ တိကျတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို အရည်အသွေးမြင့်မားစွာ ဖော်ပြရာမှာအသုံးပြုတဲ့ လေယာဉ်တင် ဒါမှမဟုတ် ဂြိုလ်တုတင်ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ရေဒါနည်းပညာရဲ့ အဆန်းသစ်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များကို အသုံးပြုထားပြီး မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထားကို မီတာအနည်းငယ်မှ တစ်မီတာခန့်အထိ တိကျစွာ ပုံဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကဲကြည့်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် အဓိကအသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ အရပ်ဘက်မှာလည်း အဝေးထိန်းအာရုံခံစနစ်တွေမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ တင့်ကားများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနဲ့ မြေပြင်အခြေစိုက်လက်နက်တွေကို ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ရွေ့လျားပစ်မှတ်များကိုလည်း မြေပြင်ရှိအရာဝတ္ထုများမှ လှိုင်းရိုက်ခတ်တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီး ခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။
Ground-Mapping Radar မှပုံဖော်ထားသည့်ပုံရိပ်
(၄၅) Gunfire Control Radar
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ short-range tracking radar သို့မဟုတ် ရေတပ်သုံး sector-scanning track-while-scan radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပစ်သို့မဟုတ် သင်္ဘောပစ် အမြောက်များချိန်တွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးရန် အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ခြေရာခံနိုင်တဲ့ အကွာအဝေး 5-15 km ရှိ်ပြီး အချက်အလက် လွှဲပြောင်းနှုန်း 1-10 Hz ရှိပါတယ်။ Gunfire Control Radar အများစုက X- ကနေ Ka-band အတွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ တင့်ကားတင်ရေဒါများမှာတော့ W-band ကိုအသုံးပြုတတ်ကြပြီး တစ်ချို့က laser radar တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုသောshort-range tracking radar
6 Multi-function radar can guide ship&#039;s missiles and detect enemy ones
Type 45 destroyers ရှိ Gunfire Control Radar စနစ်
ကျွန်တော်လည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းဖိုရမ်ကို ရောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်မရေးဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဖိုရမ်ကညီအစ်ကို မောင်နှမတွေဆွေးနွေးထားတာတွေကိုဖတ်ပြီး ပညာဗဟုသုတတွေတော့ ရှာမှီးဖြစ်တာပေါ့လေ။ ဖိုရမ်ကကိုယ့်အပေါ်အကျိုးပြုနေသလို ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ဖိုရမ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်အားဖြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ စားလည်းစားသုံး ဖြန့်လည်းဖြန့်ဝေကြတာပေါ့ဗျာ.. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်အဓွန့်ရှည်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲထိန်းသိမ်းသွားမှဖြစ်မှာပါ။ ကဲ..ကျွန်တော်တော့ ခြေလှမ်းစိတ်လေးတွေဆက်လှမ်းနေပါပြီ.... ၀ိုင်းဝန်းဖေးမကြပါဦးဗျာ...
(၄၆)	Height Finding Radar
လေထုအတွင်းရှိအရာဝတ္ထုများရဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ နိမ့်မြင့်ထောင့် (Elevation Angle) တို့ကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Surveillance Radar တွေနဲ့တွဲဘက်အသုံးပြုလေ့ရှ်ိကြပါတယ်။ ဒီရေဒါမျိုးဟာ 2D ရေဒါမျိုးဖြစ်ပြီး ညွှန်းရပ်အစား နိမ့်မြင့်ထောင့်ကိုတိုင်းတာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Surveillance Radar တွေနဲ့ တွဲဘက် အသုံးပြုတဲ့အတွက် ပစ်မှတ်တည်ရှိရာအရပ်မျက်နှာဘက်မှာ အပေါ်အောက် ရှာဖွေဖမ်းယူမှု ပြုလုပ်ပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အမြင့်ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်အောက် ရွေ့လျားပြီး အမြင့်တိုင်းတာတဲ့အတွက် Height Finding Radar တွေရဲ့အင်တင်နာအများစုဟာ Nodding Antenna အမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Height Finder တွေဟာ 3D, Stacked Beam Radar များ ဒါမှမဟုတ် Phased Array Search Radar များအဖြစ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရုရှထုတ် PRV-16 Height Finding Radar(အမြင့်ရှာရေဒါ)
(၄၇) Helicopter Radar
ရဟတ်ယာဉ် (Helicopter) တွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါတွေကို Helicopter Radar လို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို တပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Earth-Surface-Scanning Radar ၊ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ လားရာ (direction)ကိုရှာဖွေရန်နဲ့ direction finding system များအတွက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ Passive Radar များနဲ့ အခြား onboard radar များဖြစ်ကြပါတယ်။
(၄၈) High-Range-Resolution (HRR) Radar
ပစ်မှတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ တန်ပြန်လှိုင်းတွေကို စစ်ထုတ်ဖို့အတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့လှိုင်းပုံစံ တွေကို ဒီရေဒါတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့နဲ့ တိကျတဲ့ ထ်ိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှု တို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အကွာအဝေးဖော်ပြမှုစနစ်များကိုလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လှိုင်းပုံစံမှာ ပျမ်းမျှစွမ်းအင် လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့အတွက် သာမန်အားဖြင့် လှိုင်းပြတ်ဖိနှိပ်မှု (pulse compression) ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ HRR စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြည့်မှီဖို့အတွက် signal bandwidth 200MHz ပတ်ဝန်းကျင် ရှိရပါမယ်။ လက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ HRR ရေဒါများမှာတော့ ပစ်မှတ်လေယာဉ်တွေရဲ့2Dimensional ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရရှိဖို့အတွက် Mono-pulse different channel data တွေနဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
(၄၉) Holographic Radar
ရေဒါ Signal တွေကို Holography ဥပဒေသများကိုအသုံးပြုပြီး ပုံဖော်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုကို3Dimensional ပုံဖော်မှုစနစ်နဲ့ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Radio Optical Arrays နဲ့ Optical Information Processing နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Holographic Radar တွေမှာ အကွာအဝေးနဲ့ ထောင့်များကို ပုံဖော်ရာမှာ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွန် ဝေးကွာတဲ့ ပစ်မှတ်များကို ခွဲခြားစီစစ်ဖို့အတွက် ဒီရေဒါတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
(၅၀) Home-on-Jamming (HOJ) Radar
Homing Missile တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး jamming ကြောင့် ပစ်မှတ်ရဲ့ ထောင့်တိုင်းတာမှု၊ အကွာအဝေးတိုင်းတာမှု အချက်အလက်တွေကို မရရှိနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ Semi active ဒါမှမဟုတ် active နည်းလမ်းနဲ့ရရှိနေတဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက်တွေကို jamming တစ်ခုခုကြောင့် မရရှိနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ Homing Missile တွေဟာ HOJ mode ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲ ပြီး ပစ်မှတ်ဆီသို့ဆက်လက် ဦးတည်ပျံသန်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ရေဒါရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဒုံးတွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၅၁) Hybrid Radar
Mono-static Radar တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Bistatic Radar အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်တွေမှာ mono-static radar နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လည်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ရှိတဲ့ ရေဒါများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်တဲ့ ရေဒါစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Frequency radio range finders with symmetrical linear frequency modulation
ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ Frequency radio range finders with nonsymmetrical linear frequency modulation မှာတုန်းက ကျွန်တော်တို့ Doppler effect ကိုထည့်မစဉ်းစားထား သေးတဲ့ အတွက် ရွေ့နေတဲ့ target တွေရဲ့ range ကိုရှာလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်နေတဲ့ target တွေရဲ့ range တွေကိုတော့ တိတိကျကျတွက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခု တော့ကျွန်တော်တို့ Doppler effect ကိုထည့်စဉ်းစားထားပါပြီ။ သူ့ကြောင့် reflected signal မှာဖြစ်လာမယ့် beat frequency ဟာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရိုးရှင်းလှပါတယ်။ တကယ်လို့သာ Doppler မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် signal ကို symmetrical linear frequency modulation လုပ်ထားတာမို့ beat frequency ဟာတစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် ညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Doppler ပါလာတဲ့အခါ beat frequency ဟာ ပုံမှာပြထားသလို beat frequency (1) နှင့် beat frequency (2) ဆိုပြီး နှစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခုက Doppler effect ကြောင့် နည်းနေပြီး တစ်ခုကတော့ Doppler effect ကြောင့်ပဲ ပိုများနေပါတယ်။ အဲလိုလေးဖြစ်နေတာကနေ beat frequency ကော Doppler frequency ကော တွက်ထုတ်ထားပါတယ်။ beat frequency ရပြီဆိုရင် Frequency radio range finders with nonsymmetrical linear frequency modulation တုန်းကလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းချက် target ရဲ့ အကွာအဝေးကိုလွယ်လင့်တကူ တွက်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ system မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းချက် target ဟာ ရွေ့နေသည်ဖြစ်စေ ရပ်နေသည်ဖြစ်စေ သူ့ရဲ့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာ တွက်ထုတ်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ှုIFF အကြောင်းဆွေးနွေးထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Radar နဲ့ ဆက်စပ် သုံးစွဲတဲ့ Helmet Mounted Display အကြောင်း လေးများလည်း မျှဝေ ဆွေးနေွး ပေးကြပါဦးဗျာ။
(၅၂) Imaging Radar
ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုဆီကတုံ့ပြန်လာတဲ့ ရေဒါ signal တွေရဲ့အခြေအနေ၊ ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို နှစ်ဘက်မြင် သို့မဟုတ် သုံးဘက်မြင်ပုံစံတွေနဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားစွာ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ ရေဒါတစ်ခုလုံး ဒါမှမဟုတ် ရေဒါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလို Mono-static ဒါမှမဟုတ် Bi-static ရေဒါများစသည်ဖြင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Imaging Radar ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည့် ပုံရိပ်
(၅၃) Impulse Radar
Impulse Radar တွေမှာ အလွန်တိုတောင်းတဲ့ pulse တွေကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အလွန် ကျယ်ပြန့်တဲ့ wave band ရှိပါတယ်။ ၎င်း pulse တွေဟာ Megahertz ပေါင်း ဆယ်ကျော်ကနေ ထောင်ကျော်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ Impulse Radar တွေမှာ video pulse တွေကို အသုံးပြုထားပြီး သမားရိုးကျ ရေဒါများနဲ့များစွာ ခြားနားမှုရှိပါတယ်။ Pulse duration အနေနဲ့ nanoseconds တစ်ဆယ်ကျော် ကနေ တစ်လောက်အထိတိုတောင်းပြီး PRF (Pulse Repetition Frequency) ကတော့ ရာကျော်ပမာဏရှိတဲ့ Hertz ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ pulse တွေရဲ့ amplitude က 1000V ရှိပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ range resolution ရှိပြီး Short-pulse Radar လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
Impulse Radar လှိုင်းပုံစံ
Novelda Impulse Radar၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုဥပဒေသ
(၅၄) Instrumentation Radar
Tracking Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ အချက်အလက်တွေ ရယူဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ပဲ့ထိန်းဒုံးတွေပစ်ခတ်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ အကွာအဝေးနဲ့ ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းများကို ခြေရာခံနိုင်ဖို့အတွက် ဒီရေဒါတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ AN/FPS-16 ရေဒါဟာ 1954 ကနေ 1956 ကာလအတွင်း အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Instrumentation Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Monopulse Instrumentation Radar အမျိုးအစားသစ်တစ်မျိုးကတော့ SCR-584 ဖြစ်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းဟာ fire control radar ကို instrumentation radar အဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသုံးစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 1960 အတောအတွင်းမှာတော့ စွမ်းအားပိုမိုကောင်းမွန်ကာ တိကျမှုလည်းမြင့်မားတဲ့ AN/FPQ6 ကဲ့သို့သော ပိုမိုကြီးမားတဲ့ရေဒါများကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ 1990 ဝန်းကျင်မှာတော့ multiple-target phased-array instrumentation radar တွေဖွံဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ပစ်မှတ်အမြောက်အမြားရဲ့ တိကျတဲ့ ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းတွေကို တစ်ချိန်ထဲမှာပဲရယူတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Tradex reentry instrumentation radar( AN/FPS-49)
Cobra Dane phased array reentry instrumentation radar
AIRCRAFT WEATHER RADAR နှင့် ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM) မှာ အစားဝင်လာမည့် SYSTEM အကြောင်း ကျေးဇူးပြုပြီး ဆွေးနွေးပေးပါ။
လေယာဉ် DESCENDING မှာ သုံးတဲ့ GLIDE SLOPE (GS) ကရော RADAR အနွယ်ဝင်ပဲလား ???????
AUTOPILOT SYSTEM (အဲဒီမတိုင်ခင် INITIAL NAVIGATION SYSTEM ) ကနေတိုးတက်လာတဲ့ FMS (FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM) ရဲ. RADAR နဲ. ဆက်စပ် အသုံးပြူပုံလေး.........
Radar Handbook လေးကောင်းလို့ဗျာ။ လာရှယ်ပေးတာပါ။ လင့်လေးပါပဲ။ အမြန်သွားဒေါင်းလိုက်ကြအုံး။ :)
hvanhtuan_RadarHandbook_softarchive.net.rar - 14.0 MB (http://up4vn.com/f=qtumnyojy)
တဆက်တည်း ကိုဇင်မောင်ထွန်းမေးထားတဲ့ ထဲကကျွန်တော်သိတာလေးတစ်ခုကတော့
NAVIGATION SYSTEM တိုင်းဟာ radar system တွေပါပဲ။ အဲဒါတော့သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ NAVIGATION SYSTEM အကြောင်းလေးတွေ အခု
သင်နေရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကြေကြေညက်ညက်နားလည်လာတဲ့အခါ အဲဒီအကြောင်းလေးတွေဆွေးနွေးပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။
ခုတော့ကျွန်တော်လဲလေ့လာနေတုန်းမို့ ဆွေးနွေးမဲ့သူရှိရင် ကြိုဆိုပါတယ်ဗျိုး ။ :)
ုKo William Paul ဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ :)
နောက်ပိုင်းမှာ ILS အစား ALS (AIRCRAFT LANDING SYSTEM) သုံးလာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ စက်တပ်ထားတဲ့ ကွင်းပဲ သုံးလို.ရတယ်။
ALS ဟာ AUTO LANDING ဖြစ်ပါတယ်။
FLY-BY-WIRE SYSTEM ရဲ. အစိတ်အပိုင်းပါ။ အခုတော့ FMS (FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM) ပေါ့။...........
NAVIGATION RADAR တွေဟာ FLY-BY-WIRE SYSTEM ကို ကူညီနေကြတယ်။
အဲဒီ ALS (AIRCRAFT LANDING SYSTEM)စက် အကြောင်း ဆွေးနွေးပေးပါ။
AUTOPILOT SYSTEM (အဲဒီမတိုင်ခင် INITIAL NAVIGATION SYSTEM ) ကနေတိုးတက်လာတဲ့ FMS (FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM) ရဲ. RADAR နဲ. ဆက်စပ် အသုံးပြူပုံလေး........
လေကြောင်းကအဖွဲ့တွေက မဆွေးနွေးဘဲ တွန်းပို့နေပါလားဗျ.. :-\_
ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးဆွေးနွေးနေရတာပါဗျာ... စနစ်တကျသင်ကြားနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့လည်းလေ့လာဖြစ်တာပါ။ အဲ့တော့လည်း :4: :4: :4:
ကိုဟိန်းညီနဲ့အတူတူဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကို ကြိုဆိုဦးမယ်ဗျို့... :2:
ကဲ...ညီအစ်ကိုတို့ရေ တက်နိုင်သလောက်လေးလက်တွဲညီညီချီတက်ကြပါစို့......( :4: ဒီလိုပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လျှောက်ပြောပြီးပျောက်ပျောက်သွားရပေါင်းများပြီ :4:)
(၅၅) Laser Radar
Carrier frequency တွေကို Infrared (အနီအောက်ရောင်ခြည်) နဲ့ visible light (အလင်း) တို့ရဲ့အပိုင်းအခြားအတွင်း အသုံးပြုထားပြီး လေဆာရောင်ခြည်တွေကိုထုတ်လွှတ်တဲ့ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သိထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း သာမန်ရေဒါတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Radio wave (microwave) တို့ဟာလည်း အလင်းနဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တို့လို electromagnetic wave တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက် အစားထိုးသုံးစွဲလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ လေဆာရေဒါတွေဟာ wave band အနေနဲ့ 10-4 ကနေ 10-7 အတွင်းမှာ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လေဆာရေဒါတွေမှာ optical transmitter, transmitting and receiving optical antennas, optical receiver, guidance system နဲ့ data processing and target coordination system စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ လေဆာရေဒါ transmitter တွေဟာ pulse နဲ့သာမက continuous mode နဲ့ပါ operate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လေဆာရေဒါတွေကို Optical Radar ဒါမှမဟုတ် Ladar လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေ၊ တိုင်းတာရေးကိရိယာတွေ၊ အာကာသနည်းပညာနယ်ပယ်၊ ရာသီဥတုခန့်မှန်းရေးနဲ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တိုင်းတာရေးနယ်ပယ် တို့မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
3-D Laser Radar
(၅၆) Lobe-on-receive-only radar
ပစ်မှတ်ရဲ့ထောင့်ကို ခြေရာခံနိုင်ဖို့အတွက် receiving lobes တွေရဲ့ အနေအထားကို အပြောင်း အလဲလုပ်တဲ့အခါမှာ fixed transmitter beam တွေကို အသုံးပြုတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Conical Scan-on-receive-only tracking radar တွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Lobe-switched version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၅၇) Low-probability-of-intercept (LPI) Radar
LPI Radar ဆိုတာ low peak power, wide transmitted spectrum, low antenna side lobes တွေကိုပေါင်းစပ်ထားပြီး emission time ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရန်သူ့ receiver တွေက signal တွေကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူထောက်လှမ်းမယ့် အကွာအဝေးထက်ပိုမိုဝေးကွာတဲ့နေရာမှ ပစ်မှတ်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ LPI Radar တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာစရာတွေအမြောက်အမြားရှိပါသေးတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ EW (အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေး) နယ်ပယ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ရေဒါမျိးဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အတွက် ပိုမိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Stealth Fighter များတွင်တပ်ဆင်သောLPI Radar
(၅၈) Meteorological Radar
ရာသီဥတုခန့်မှန်းခြင်း၊ မုန်တိုင်းနဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှု သတိပေးချက်များနဲ့ လေထုဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းရယူဖို့အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေရဲ့ ပစ်မှတ်အရာဝတ္ထုတွေကတော့ မိုး၊ မိုးသီးနဲ့ ဆီးနှင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ S-band ကနေ X-band အတွင်း စွမ်းအင်လျှော့ကျမှုမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားတဲ့ RCS(Radar Cross Sections) ကိုရရှိစေပါတယ်။ တိမ်တွေ မြူတွေကိုတော့ millimeter-wave bands များက ပိုမိုထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ လေထုလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လေကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုတော့ လေထဲမှာပါလာတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ တခြား အပိုင်းအစများကို ခြေရာခံထောက်လှမ်းပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိအဓိကထားခန့်မှန်းလိုတဲ့ ရာသီဥတုအချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရေဒါများကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ Meteorological Radar တွေမှာတော့ pencil beam နဲ့ sector လိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၃၆၀ ဒီဂရီစလုံး လှည့်ပတ်ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်ပြီး elevation အနေနဲ့ကတော့ sector လိုက် scan ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် spiral scan နည်းလမ်းနဲ့ပဲ azimuth ကော elevation ပါထောက်လှမ်းပြီး three-dimensional data တွေကို ရယူပါတယ်။
Meteorological Radar ရဲ့ပုံဖော်မှုစနစ်
(၅၉) Microwave Radar
ဒီရေဒါတွေမှာ frequency bands အနေနဲ့ 2GHz ကနေ 30GHz (wavelength 15cm ကနေ 1cm) အတွင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် S-band (2.7 to 3.5GHz), C-band (5.25 to 5.925GHz), X-band (8.5 to 10.68GHz) နဲ့ Ku-Band (13.4 to 14 and 15.7 to 17.7GHz) တို့ဟာ Microwave bands တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ L-band နဲ့အောက်ရှိတဲ့ frequency တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ရေဒါများကိုတော့ Microwave radar တွေအဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ Ka-band (33.4 to 36GHz) ဟာ Microwave နဲ့ Millimeter-wave အကြားမှာရှိတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံမှာ Microwave အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
(၆၀) Millimeter-wave Radar
ဒီရေဒါတွေဟာ frequency 30 GHz ကနေ 300GHz အထိရှိတဲ့ electromagnetic wave တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီ wave တွေဟာ wavelength 10 ကနေ 1 mm အတွင်းရှိတဲ့အတွက် ၎င်းတို့ကို Millimeter-wave လို့ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Millimeter-wave တွေဟာ ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း စုပ်ယူခံရနိုင်မှုကြောင့် စွမ်းအင်လျှော့ကျမှု အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စွမ်းအင်လျှော့ကျမှု အနည်းဆုံးအပိုင်းအခြားဖြစ်တဲ့ 35,94,140 နဲ့ 200GHz တို့ကို ရေဒါတွေမှာအသုံးပြုကြရပါတယ်။ Millimeter Radar များကို ယနေ့ခေတ်မှာ active-radar, homing seekers, low altitudes tracking radars, air-to-ground terrain avoidance နဲ့ terrain mapping radars များမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၆၁) Missile Guidance Radar
Tracking Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်ဒါမှမဟုတ်၊ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မယ့်ဒုံး ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုစလုံးရဲ့ တည်နေရာအချက်အလက်တွေကိုရယူဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဒုံးများနဲ့ မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးဒုံးနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဒီရေဒါတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရေဒါထိန်းချုပ် မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးနဲ့ ဝေဟင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဒုံးကိုမပစ်လွှတ်မီ ပစ်မှတ်ကို အရင်ဖမ်းယူခြေရာခံပါတယ်။ ဒါမှသာ ဘယ်အချိန်မှာ ထိတွေ့ဖျက်ဆီးနိုင်မယ်ဆိုတာ တွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုံးပစ်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Target-tracking Radar (TTR) တွေဆီကရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက်နဲ့ Missile Tracking Radar (MTR) ကနေရရှိတဲ့ ဒုံးအချက်အလက်တို့အပေါ်အခြေခံပြီး ထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှု ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Missile Guidance Radar တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာလည်း အတော်ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် နောက်များမှ အလျဉ်းသင့်သလို ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ရှေ့ပဲဆက်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်လည်း အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲ…ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။
S 75 Fan Song E Missile Guidance Radar
(၆၂) Mono-pulse Radar
ပစ်မှတ်ရဲ့ တည်နေရာထောင့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲတပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်တင်နာနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ၎င်းထက်ပိုတဲ့ အင်တင်နာတွေက ရရှိတဲ့ signal တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် တိုင်းတာရရှိတဲ့ ရေဒါနည်းပညာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါတွေမှာ အစီစဉ်တကျထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ beams တွေနဲ့ lobe switching ဒါမှမဟုတ် conical scanning နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီလို beams များကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် pulse တစ်ခုထဲကနေ two-dimensional ထောင့်ခန့်မှန်းမှုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီရေဒါ တွေကို Mono-pulse Radar လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာမှာ ပိုမိုတိကျစေရန်နဲ့ Doppler resolution ရရှိစေရန်အတွက် pulse အများအပြားကို အသုံးပြုရပါတယ်။ mono-pulse သဘောတရားကို continuous နဲ့ pulse ရေဒါနှစ်မျိုးစလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Mono-pulse Radar တွေဟာ ထောင့်တိုင်းတာရာမှာ တိကျမှုမြင့်မားတဲ့အတွက် ခေတ်ပေါ် ရေဒါတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြပါတယ်။
MSSR - Monopulse Secondary Surveillance Radar
(၆၃) Mono-static Radar
ရေဒါလှိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့ လက်ခံဖမ်းယူခြင်းတို့ကို အင်တင်နာတစ်ခုထဲ ဒါမှမဟုတ် ကပ်လျက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်တင်နာများမှ ပြုလုပ်တဲ့ ရေဒါစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် ရေဒါများစုဟာ mono-static ဥပဒေသများကို အခြေခံပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Radar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့မှာ ရှိတာလေးတွေပါ
(၆၄) Moving-Target-Indication Radar
အရာဝတ္ထုတွေဆီက ပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့လှိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး တည်ငြိမ်နေတဲ့ပစ်မှတ်တွေနဲ့ နှေးကွေးစွာ ရွှေ့လျားနေတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ပစ်မှတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရွှေ့လျားပစ်မှတ်များကိုသာ သီးသန့် ပုံဖော်ပေးတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေမှာ သတ်မှတ်အလျင်နှုန်းတစ်ခုထားရှိပြီး ၎င်းအောက် အလျင်နှုန်းနဲ့ ရွှေ့လျားနေတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို တည်ငြိမ်ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ရေဒါ အားလုံးနီးပါးမှာ ဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိပါတယ်။
(၆၅) Multiband Radar
ဒီရေဒါတွေမှာ radar band နှစ်ခုဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုပြီးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ transmitter, receiver, antenna နဲ့ microwave အစိတ်အပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ စံပြု dual-band-tracking radar တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flycatcher, Flakpanzer ရေဒါတွေမှာ ပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေဖို့နဲ့ ခြေရာခံဖို့အတွက် X-band ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အမြောက်များနဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ Ka-band ကိုပြောင်းလဲပြီး ထိန်းကြောင်းမှုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ X-band channel က ပစ်မှတ်ရဲ့ အကွာအဝေး၊ နိမ့်မြင့်ထောင့်များကို ဆက်လက်တိုင်းတာပေးပြီး Ka-band ကတော့ ပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်ရေးမှာ ပိုမိုတိကျစေရန် လုပ်ဆောင်ပေး ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် အင်တင်နာတစ်ခုထဲကို dual-band-feed system အနေနဲ့အသုံးပြုပြီး Transmitter နဲ့ Receiver များကတော့ သီးခြားစီပါရှိပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ band သုံးခုနဲ့ အထက်အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါ အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ U.S. Naval Research Laboratory ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ tracking radar တစ်ခုမှာ ဆိုရင် L,S နဲ့ X-band တွေကို တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
(၆၆) Multibeam Radar
အင်တင်နာကနေပြီး သီးခြားရှာဖွေဖမ်းယူမှုပြုလုပ်နိုင်တဲ့ beam အများအပြားကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပြီး သီးခြား signal processing channel တွေရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Multibeam Radar တွေကို Scanning နဲ့ Without Scanning ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ 3D Radar တွေ၊ Monopulse Radar တွေဟာ Multiple-beam Radar အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး အချို့သော Space Target Detection Radar တွေဟာလည်း ဒီရေဒါအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။
GIRAFFE Agile Multi-Beam (AMB) air defence search radar
(၆၇) Multichannel Radar
Channel အများအပြားကနေပြီး signal processing ကို တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ channel တစ်ခုချင်းစီဟာ ပစ်မှတ်ရဲ့ အကွာအဝေး၊ အလျင်နှုန်း၊ ညွှန်းရပ်စတာတွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ အတွက် ပစ်မှတ်စီကလာတဲ့ signal တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ channel အားလုံးကနေတစ်ချိန်ထဲမှာ processing ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ signal တွေပေါ်မူတည်ပြီး ပစ်မှတ်တွေရဲ့ တည်နေရာအချက်အလက်တွေကို ရရှိ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Multichannel ရေဒါတွေကို multichannel for range, multichannel for velocity, space multichannel နဲ့ frequency multichannel ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Multichannel Radar နည်းပညာကို ခေတ်ပေါ်ရေဒါတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် monopulse radars, radars for detecting space targets, နဲ့ multistatic radars တွေဟာ ဒီရေဒါအမျိုးအစားထဲ ပါဝင်ပါတယ်။
(၆၈) Multifunction Radar (MFR)
အင်တင်နာတစ်ခုထဲကနေပြီး frequency band တစ်မျိုးထဲကိုသာအသုံးပြုပြီး ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ခြေရာခံခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ ပဲ့ထိန်းဒုံး စနစ်တွေမှာ Multifunction phased array antenna တွေကိုအသုံးပြုပြီး ပစ်မှတ်ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ခြေရာခံခြင်း တို့ကိုသာမက ဒုံးထိန်းကြောင်းမှုစနစ်အတွက်ပါ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ MFR တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ နေရာနဲ့ အလေးချိန်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ လုပ်ဆောင်မှု နည်းလမ်းကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ ပစ်မှတ်ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ခြေရာခံခြင်းတို့အကြား ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အမှားတွေကို ဖယ်ရှာပေးနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ တစ်ခုထဲသော frequency ကို ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလအတွင်း mode အများအပြားအသုံးပြုနိုင်ရန်နဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက်များ အဆက်မပြတ်ရရှိရန် စီစဉ်ထားရှိဖို့လိုခြင်း၊ လှိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းမှာ ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ waveform တွေမှာ signal processing ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Thomson Master-T Multifunction Radar
(၆၉) Multifunction Array Radar (MFAR)
ရှာဖွေခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနဲ့ ဒုံးထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှုတို့ကို frequency band တစ်ခုထဲကနေ တူညီတဲ့ array နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ electronically scanned radar အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါများကို အနောက်တိုင်း မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးလက်နက်စနစ်များဖြစ်တဲ့ Patriot နဲ့ Aegis တို့လိုမျိုးတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Patriot စနစ်မှာဆိုရင် ရေဒါယာဉ်ပေါ်က array တစ်ခုထဲကိုပဲအသုံးပြုပြိး ညွှန်းရပ် ၉၀ဒီဂရီအပိုင်းအခြားကို နိမ့်မြင့်ထောင့်အားဖြင့် ရေပြင်ညီမှ အပေါ် တည့်တည့်အထိ လှည့်ပတ်ဖမ်းယူလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရေဒါမှာ C-band ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ Aegis MFAR တွေကတော့ ထုလိုက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရေပြင်ညီရှာဖွေခြင်း၊ ပစ်မှတ်အမြောက်အများ ခြေရာ ခံခြင်းနဲ့ ဒုံးလမ်းကြောင်းကို အမိန့်ပေးထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ S-band ကိုအသုံးပြုထားပြီး သင်္ဘောပေါ်မှ array လေးခုနဲ့ ၃၆၀ဒီဂရီညွှန်းရပ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
AN/MPQ-53 Patriot multifunction array radar
AN/SPY-1 Aegis multifunction array radar
ကြီးမားတဲ့ MFAR တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Moscow မြောက်ပိုင်းနားမှာထားရှိတဲ့ Don Radar ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရေဒါရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ballistic ပစ်မှတ်တွေကို ထောက်လှမ်းဖို့၊ ခြေရာခံဖို့၊ အမျိုးအစားခွဲခြားပေးဖို့နဲ့ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မယ့် ဒုံးတွေကို ထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိရမစ်သဏ္ဍာန် အဆောင်အဦရဲ့ အရပ်မျက်နှာတိုင်းက receiving antenna တိုင်းက သီးခြား monopulse beams အုပ်စုများကို လက်ခံဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီရေဒါဟာ centimeter-wave band မှာလုပ်ဆောင်ပြီး ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးအထိ ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ target resolution ၊ accuracy ၊ jamming immunity နဲ့ target capacity တို့မြင့်မားပါတယ်။
The Don radar
လေယာဉ်တင် MFAR အသုံးပြုများကိုတော့ B1B ဗုံးကြဲလေယာဉ်နဲ့ MiG-31 တိုက်လေယာဉ်တွေမှာ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ တွေ့ရပါတယ်။ electronic scanned လုပ်ခြင်းအားဖြင့် mechanically scanned စနစ်တွေမှာ အပြန်အလှန်လှည့်ပတ်ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပစ်မှတ်အမြောက်အများကိုလည်း ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
AN/APQ-164 phased array for B-1B
Multifunction phased array for MiG-31 Flash Dance airborne radar
(၇၀) Multilateration Radar
ဒီရေဒါစနစ်တွေမှာတော့ စခန်းနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ၎င်းထက်ပိုတဲ့ ရေဒါစခန်းတွေက တိုင်းတာရရှိတဲ့ အကွာအဝေး၊ အကွာအဝေးပေါင်းလဒ်၊ အကွာအဝေးခြားနားချက် စတဲ့အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့တည်နေရာကို ရယူဖော်ပြပေးပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Global Positioning System (GPS) ဟာဆိုရင် Multilateration Radar နည်းပညာကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၇၁) Multistatic Radar
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ထုတ်လွှင့်မှု၊ ဖမ်းယူမှု ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လွှင့်ဖမ်းယူမှုနေရာများမှ signals အများအပြားကို တပြိုင်ထဲ processing ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပစ်မှတ်အချက်အလက်တွေကို ရရှိတွက်ချက်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Multistatic Radar တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တိုင်းတာနိုင်တဲ့ ထိရောက်အကွာအဝေးတိုးတက်မြင့်မားလာခြင်း၊ ထောင့်တိုင်းတာရာ၌မှားယွင်းနိုင်မှုကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ တည်နေရာပြအတိုင်းအတာသုံးခုစလုံးရရှိနိုင်ခြင်းနဲ့ အလျင်နှုန်းကိုတိုင်းတာပေးနိုင်ခြင်း၊ noise များကိုကာကွယ် ရာတွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်စေခြင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလာခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိလာစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းအလိုက် ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်မှသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံး Multistatic Radar ကတော့ Bistatic Radar ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ ဆက်မရေးဖြစ်တာ ကြာသွားတယ် :( ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ..
အခုဆက်ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ... အချိန်ရသလောက်ပေါ့.... လာအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
(၇၂) Navigation Radar
ရွေ့လျားနေတဲ့ယာဉ်များမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး မြေပုံတွေလိုမျိုး ပုံသေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားမှုကို ပုံဖော်ပြတဲ့ လမ်ကြောင်းပြရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ရေယာဉ်တွေနဲ့ လေယာဉ်တွေမှာ အများဆုံးတပ်ဆင် အသုံးပြုပြီး ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုကတော့ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတော့ လေယာဉ်တင် ဗုံးကြဲလမ်းကြောင်းပြရေဒါများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ်များမှာလည်း ရွေ့လျားနဲ့ ရပ်တည်ပစ်မှတ်များကို ခြေရာခံဖမ်းယူခြင်း၊ မြေပုံလမ်းကြောင်းပြခြင်းနည်းပညာများကို အခြေခံထားပါတယ်။ Navigation Radar တွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ ညွှန်းရပ်နဲ့ အကွာအဝေးနှစ်ခုစလုံးမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားစွာ တိုင်းတာနိုင်ခြင်းနှင့် ပင်လယ်ပြင်နဲ့ အခြားနှောင့်ယှက်လှိုင်းများ ရှိနေတဲ့ကြားကနေ ပုံသေမျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ကို ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေယာဉ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Navigation Radar တွေရဲ့ operating band ရွေးချယ်မှုဟာ အသုံးပြုမယ့် အကွာအဝေးနဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတို့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တာတိုအတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် X-band နဲ့ Ku-band တို့ဟာ သင့်တော်ပါတယ်။ Ku-band ကတော့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးနည်းပါတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအတွင်းမှာ တာဝေးအတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ S-band ကသင့်တော်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ISO (International Standards Organization) ကသတ်မှတ်လိုက်တာကတော့ ကြီးမားတဲ့ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတိုင်းမှာ X-band နဲ့ S-band အသီးသီးရှိတဲ့ ရေဒါနှစ်မျိုးပါရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဘယ်လိုရှိသလဲတော့သိဘူး။ :D သိရှိတဲ့ သူများ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြစေကုန်.. :P
(၇၃) Noiselike-waveform Radar
ပုံမှန် pulse ဒါမှမဟုတ် Continuous Wave များကို ထုတ်လွှင့်မဲ့အစား Noise လိုမျိုး လှိုင်းပုံစံတွေကို ထုတ်လွှင့်တဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ radio interference တွေကြားထဲက ပစ်မှတ်ကိုရိုက်ခတ်ပြီး ပြန်လာမယ့် signals တွေကို ဖမ်းယူရရှိစေရန်နဲ့ ၎င်းရဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ အလျင်နှုန်းကို တိုင်းတာနိုင်စေရန်အတွက် correlation signal-processing ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ pseudo noise signal များကို တိကျမှုနဲ့ အကွာအဝေးမှန်ကန်မှုပိုမိုရရှိစေဖို့အတွက် အများအားဖြင့် Close-in Radar တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၇၄) Noncoherent Radar
ထုတ်လွှင့် Signal နဲ့ ဖမ်းယူတဲ့ Signal များအကြား ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှု အဆက်အစပ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းမရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Non-coherent Radar တွေမှာ ပစ်မှတ်ဆီမှ ပဲ့တင်ပြန် လာတဲ့ signal များကို သီးခြားစီခွဲခြားထောက်လှမ်းပါတယ်။ ထောက်လှမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှ ပြန်လည်ပေါင်း စပ်ပြီး Threshold သတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးချပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးကတော့ Non-coherent Pulse Radar ဖြစ်ပြီး ၎င်းဟာ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့ ဖမ်းယူခြင်းတို့ကို RF Signal Pulse အတွဲတန်းအနေနဲ့ ထုတ်လွှင့် ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ ထုတ်လွှင့်နဲ့ ဖမ်းယူ Signals များ ဟန်ချက်ညီစေဖို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Coherent Oscillation မပါရှိပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ non-coherent ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို ဖြုတ်ချပြီး pulse radar လို့ပဲ အလွယ်တကူ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို ထောက်လှမ်းခြင်းနဲ့ တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာအမြောက်အမြားကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၇၅) Oil slick detection Radar
ရေမျက်နှာပြင်၏ တင်းအား ပေါ်မူတည်ပြီး clutter ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို အခြေခံပြီးတော့ ပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆီများတင်ကျန်နေမှုရှိမရှိကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ resolution မြင့်မားတဲ့ X-band Radar များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လှေငယ်လေးတွေကနေ ယိုစိမ့်ကျလာတဲ့ အနည်းငယ်မျှသော ဆီပမာဏအထိ ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်တင် Synthetic Aperture Radar များကိုတော့ ကြီးမားတဲ့ ဧရိယာအတွင်း ဆီယိုစိမ့်မှုကို ထောက်လှမ်းရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Oil slick detection Radar Display
(၇၆) Optical (band) Radar
မြင်နိုင်သည့် အပိုင်းတွင်ရှိသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Laser Radar (LADAR) များဟာ ဒီရေဒါအမျိုးအစးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
(၇၇) Over-the-horizon (OTH) Radar
အသင့်အတင့် နိမ့်တဲ့ carrier frequency များ (သာမန်အားဖြင့် High frequency (HF) band) များကို အသုံးပြုပြီး မြေပြင်လှိုင်း (ground-wave) ဒါမှမဟုတ် ionosphere အလွှာကိုရိုက်ခတ်ပြီးပြန်လာမယ့် ကောင်းကင်လှိုင်း (sky-wave) ဖြာထွက်မှုနည်းလမ်းများနဲ့ အဖြောင့်တိုင်းမြင်ရသည်ထက်ပိုတဲ့ အကွာအဝေး၊ တစ်နည်းအားဖြင့်မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းလွန်အကွာအဝေးကို ဖမ်းယူထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ OTH Radar များကို တိုက်ချင်းပစ် Ballistics ဒုံးများ ပစ်ခတ်မှုကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ၎င်းဒုံးပျံများနှင့် ဂြိုလ်တုများပျံသန်းနေစဉ်တို့တွင် ထောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ OTH Radar များကနေ ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထား တို့ကို သာမက ရာသီဥတုအခြေအနေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအထိ ထောက်လှမ်းရယူနိုင်ပါတယ်။
Over-the-horizon (OTH) Radar မှထောက်လှမ်းနိုင်သည့် အကွာအဝေး
(၇၈) Passive Radar
Passive Radar ဆိုတာကတော့ Transmitter မပါရှိတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ ပစ်မှတ်ကထုတ်လွှတ်တဲ့ ဖြာထွက်မှုတွေကိုဖမ်းယူအသုံးပြုပြီး ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက်များတိုင်းတာခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပစ်မှတ်ဆီကဖြာထွက်မှုတွေကတော့ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အပူနဲ့အခြားဖြာထွက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြာထွက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး သတင်းအချက်အလက်ပြတ်တောက်နိုင်မှုကြောင့် ဖမ်းယူမှုနေရာ နှစ်ခုထက်မနည်းအသုံးပြုပြီး ထုတ်လွှင့်တဲ့အရင်းအမြစ်ရဲ့ တည်နေရာကို ဖမ်းယူထောက်လှမ်းရပါတယ်။
VERA-E passive radar
(၇၉) Personnel-Detection Radar
လူများရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို စောင့်ကြည့်မှုပြုရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မြေပြင်ဒါမှမဟုတ် ရန်သူ့နယ်မြေထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့အခါတွေမှာ ဒီရေဒါနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်း ပုံဖော်ပေးပြီး အချက်အလက်များရယူတိုက်ပွဲဝင်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေဟာ သာမန်အားဖြင့် သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများသာဖြစ်ပြီး စစ်သည်များမှသယ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်များပေါ်တင်ဆောင်၍လည်းကောင်း၊ အကာအကွယ်ပေးရမယ့် နေရာအနီးမြေပြင်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စစ်မြေပြင်ကို ယူဆောင်အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ pulse နဲ့ CW လှိုင်းအမျိုး အစားနှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုနိုင်ပြီး အကွာအဝေးကိုပါတွက်ချက်တိုင်းတာနိုင်ရန် FM CW လှိုင်းများကို အသုံးပြုပါတယ်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး အင်တင်နာတစ်ခုထဲကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
(၈၀) Phased-Array Radar
Electronically နဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုပြုတဲ့ အင်တင်နာ (phased-array antenna) ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို mechanically နဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ အခြေပေါ်မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ electronic scan နည်းလမ်းဟာ ရေဒါ beam တွေကို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း (မီလီစက္ကန့် ဒါမှမဟုတ် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း) ထပ်ခါထပ်ခါ ထိန်းကျောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ နေရာများစွာကို လှည့်ပတ်ထောက်လှမ်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပစ်မှတ် အမြောက်အမြားကို တစ်ပြိုင်နက်ခြေရာခံခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ artillery and mortar location radar ၊ fire control radar ၊ instrumentation radar ၊ multi-function array radar ၊ precision approach radar ၊ space target acquisition radar နဲ့ three-dimensional radar အချို့မှာ Phase-Array နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီရေဒါဟာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ အများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်။
(၈၁) Pincushion Radar
Beam အမြောက်အမြားကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ Reflector Antenna ရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အပ်ထိုးတဲ့ ဖုံ (ခေါင်းအုန်းအသေးစား) လေးမှာ အပ်အများအပြားကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထိုးနိုင်သလို အင်တင်နာကနေ beam ပုံစံအမျိုးမျိုးထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့ ရေဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၈၂) Polarimetric Radar
Polarization အမျိုးမျိုးမှာ ပစ်မှတ်များရဲ့ Radar Cross Section (RCS) ကွဲပြားခြားနားမှုပေါ်အခြေခံပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် clutter တွေကြားထဲကနေ ပစ်မှတ်ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ polarization ရှိတဲ့ receiving channel နှစ်ခုကို အနည်းဆုံးလိုအပ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ transmitting channel နှစ်ခုကိုလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို noncooperative target recognition (NCTR), adaptive polarization for clutter rejection နဲ့ survey of surface features စတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
S-band polarimetric radar (S-Pol)
(၈၃) Polarization Adaptive Radar
ဒီရေဒါတွေမှာတော့ receiving polarization ဒါမှမဟုတ် receiving နဲ့ transmitting polarization နှစ်ခုစလုံးကို တစ်ဆက်စပ်ထဲအသုံးပြုထားပြီး signal-to-interference ratio (S/I) ကို အများဆုံးရရှိအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
(၈၄) Polarization Diversity Radar
ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် receiving channel နှစ်ခုထားရှိတဲ့ ရေဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကိုရိုက်ခတ်ပြီး ပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ signal အများစုမှာ polarized အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခုစလုံးပါဝင်ပါတယ်။ noise များတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပစ်မှတ်ရဲ့ RCS ကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဖမ်းယူမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ clutter များတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ signal-to-interference ratio (S/I) အများဆုံးရရှိစေရန် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး receiving signal များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါထားပါတယ်။ Polarization diversity ကို transmitting channel နှစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အချိန် ဒါမှမဟုတ် ကြိမ်နှုန်းကို အများအပြားပေါင်းစပ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းဟာ receiving channel နှစ်ခုကို အသုံးပြုတာထက် ငွေကုန်ကြေးကျပိုများပါလိမ့်မယ်။
(၈၅) Police Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ (တစ်ခါတစ်ရံ လက်ကိုင်အရွယ်အထိ) သေးငယ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ သွားလာနေကြတဲ့ ယာဉ်များရဲ့ အလျင်နှုန်းကို တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေ မှာ X-band ဒါမှမဟုတ် K-band ရှိတဲ့ Un-modulated CW လှိုင်းပုံစံတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် Police Radar တွေမှာတော့ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ယာဉ်တွေပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါသတိပေးကြားဖြတ်ဖမ်းယူစက်များမှတစ်ဆင့် ယာဉ်မောင်းသူများကို ရေဒါရဲ့တည်နေရာကို သတိပေး ဖော်ပြတဲ့စနစ်ရဲ့ ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်စေရန်နဲ့ angular resolution ကိုရရှိစေရန်အတွက် လေဆာကို အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကPolice Radarဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာညွှန်ပြပေးတဲ့ ကိရိယာ
(၈၆) Precision Approach Radar (PAR)
လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ ဒါမှမဟုတ် လေကြောင်းသွားလာမှုစောင့်ကြည့်ရေးနေရာများမှာ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိတဲ့ ရေဒါစနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ရဲ့ ချဉ်းကပ်ရာလမ်းကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန်နဲ့ ချဉ်းကပ်လာတဲ့ လေယာဉ်ကို လမ်းကြောင်းပြတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူပြုဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ၎င်းဟာ Ground-Controlled Approach (GCA) Radar စနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်အခြေစိုက် PAR တွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် X-band မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး အင်တင်ရာရဲ့ beam widths ဟာ ၁ဒီဂရီ ဒါမှမဟုတ် ၎င်းထက်နည်းပါတယ်။ ဒါမှသာ ဆင်းသက်ခါနီးနေတဲ့ ထောင့်နိမ့် (low-elevation) လေယာဉ်တွေကို တိကျစွာ ဖမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ PAR အမျိုးအစားတွေကတော့ Sector-scanning Fan-beam PAR ၊ Raster-scanning pencil beam PAR နဲ့ Tracking PAR ဆိုတဲ့ စနစ်သုံးမျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
AN/TPN-19 Precision Approach Radar
(၈၇) Primary Radar
သမားရိုးကျရေဒါများ ကို Primary Radar လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ primary ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာ သီးခြားအဓိပ္ပာယ်မဆောင်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်း အသုံးပြုလာတဲ့ secondary radar များနဲ့ကွဲပြားအောင် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရင်းက တွင်ကျယ်လာဟန်တူပါတယ်။ ၄င်းရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ရေဒါကနေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ ၄င်းလှိုင်းတွေဟာ အရာဝတ္ထုကို ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်ပြီးပြန်လာပါတယ်။ ဒီလှိုင်းတွေကို ရေဒါကပြန်လည်းဖမ်းယူပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အချက်အလက်များကို တိုင်းတာရယူပါတယ်။ ဒီရေဒါအကြောင်းကို IFF System (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5994.0.html)မှာလည်း အနည်းငယ်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
(၈၈) Proximity Fuse Radar
Projectile ဒါမှမဟုတ် guided နည်းစနစ်နဲ့ပစ်ခတ်တဲ့ ဒုံးတွေမှာတပ်ဆင်ထားပြီး ပစ်မှတ်အနီးနားရောက်တဲ့အခါမှာ ပေါက်ကွဲစေရန်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက လေယာဉ်ပစ်အမြောက်တွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဟာ Proximity fuse radar ရဲ့ပထမဆုံး အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Proximity Fuse Radar ဟာအခြေခံအားဖြင့် CW Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အင်တင်နာမှ ပစ်မှတ်ကိုဖမ်းယူရရှိချိန်မှာ Doppler voltage ပြောင်းလဲမှုကို အာရုံခံပေးပါတယ်။
Proximity Fuse Radar
(၈၉) Pulse Doppler Radar
Pulse တွေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ Doppler Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး coherent integration ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ band ရှိတဲ့ ပစ်မှတ် Doppler ကိုရရှိစေဖို့ ဒီရေဒါတွေမှာ narrow Doppler filters များကို အတန်းလိုက်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Pulse Doppler Radar တွေဟာ MTI Radar တွေနဲ့မတူပါဘူး။ MTI Radar တွေမှာတော့ clutter တွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ bandstop filter တစ်ခုကို အသုံးပြုထားပြီး ရွေ့လျားပစ်မှတ်များကို လက်ခံဖမ်းယူဖို့ bandpass filter ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ၎င်းမှာ coherent integration ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိပါဘူး။ Pulse Doppler Radar တွေဟာ အမြင့် အလယ်အလတ်နဲ့ အနိမ့်ရှိတဲ့ PRF (Pulse Repetition Frequency) mode တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Pulse Doppler Radar ရဲ့ အခြေခံ block diagram
(၉၀) PRF-agility and PRF-diversity Radars
ဒီရေဒါများဟာ PRF (Pulse Repetition Frequency) ကို လိုသလိုပြောင်းလဲပြီး range အရသော်လည်းကောင်း၊ Doppler အရသော်လည်းကောင်း ဝေဝါးမှုဖြစ်တာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး ထပ်ဆင့် Jamming လုပ်ခံရခြင်းကိုလည်း လျှော့ချကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဒါဟာ Pulse တွေရဲ့ PRF တွေကို ပြောင်းလဲနေခြင်းအားဖြင့် repeater ကနေပြီး ပစ်မှတ်အတုတွေကို ထုတ်လွှင့်ပြီး Jamming ပြုလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့လုပ်ဆောင်တာဟာ အကွာအဝေးဝေဝါးမှု ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ coherent integration နဲ့ clutter တွေရဲ့ MTI rejection တို့မှာ လှိုင်းပုံစံကြောင့် အကွာအဝေးဝေဝါးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုတော့ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဘူး။
(၉၁) RCS Instrumentation Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ ပစ်မှတ်တွေရဲ့ RCS (Radar Cross Section) ကို စမ်းသပ်အကွာအဝေးအတွင်း ဒါမှမဟုတ် တိုင်းတာရေးဇုံအတွင်း ပျံသန်းနေစဉ်မှာ တိုင်းတာရယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပျံသန်းနေတဲ့ ပစ်မှတ်များကို တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက် RCS Instrumentation Radar တွေဟာ Mono-pulse Tracker ဖြစ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ အင်တင်နာရှုထောင့်အနေအထားဟာ velocity vector နဲ့ တစ်တန်းထဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ အင်တင်နာရဲ့ gain ကိုလည်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။
(၉၂) Real-Aperture Radar
Synthetic-Aperture Radar ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး Beam ဖြစ်ပေါ်ဖို့ သူ့ရဲ့ အင်တင်နာကိုအသုံးပြုပြီး angular resolution ရရှိစေတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၉၃) Rendezvous Radar
လဆင်းယာဉ်ကဲ့သို့သော အာကာသယာဉ်များမှာ အသုံးပြုတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသယာဉ်တစ်စီးနဲ့တစ်စီး ချိတ်ဆက်ရာမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ပါ တစ်ပါတည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး Ku-band မှာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အောက်ကဇယားမှာ ဒီရေဒါရဲ့ အတိုင်းအတာအချက်အလက်တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၉၄) Scan-on-receive-only Radar
Conical Scan နဲ့ အခြားသော Sequential Lobing နည်းလမ်းတွေကို ဖမ်းယူမှုအစိတ်အပိုင်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ scan လုပ်နေစဉ်မှာ transmitting beam ကို အသေထားပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Conical Scan ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ နည်းလမ်းကို COSRO (Conical Scan on Receive Only) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကယ်၍ receiving channel နှစ်ခုကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Conopulse လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၉၅) Search Radar
သီးခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ နယ်ပယ်အတွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပစ်မှတ်များကို စောလျင်စွာဖမ်းယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Surveillance Radar တွေကတော့ သီးခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာ တစ်လျှောက် ဖမ်းမိထားတဲ့ ပစ်မှတ်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ Search Radar တွေက ပစ်မှတ်ကို ဖမ်းယူရရှိဖို့အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ တွေ့ရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ကို Surveillance Radar က စောင့်ကြည့် ခြေရာခံပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ Search Radar က ရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်အချက်အလက်တွေကို Fire Control Radar များသို့ ပေးပို့ပြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် 3D Phase Array Radar တွေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုဟာ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ Phase Array Radar တွေဟာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရေဒါတွေကို Search Radar တွေအဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ Search Radar တွေကို အသုံးပြုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး Air Search Radar, Surface Search Radar, Horizon Search Radar စသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖမ်းယူရမိတဲ့ အတိုင်းအတာအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး 2D Search Radar, 3D Search Radar စသဖြင့်လည်း သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
(၉၆) Secondary Radar
Secondary radar ဆိုတာကတော့ ပစ်မှတ်မှာ တပ်ဆင်သယ်ဆောင်လာတဲ့ beacon, transponder ဒါမှမဟုတ် repeater တွေကနေ ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ Signal တွေကို လက်ခံဖမ်းယူပြီး လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကို ရိုက်ခတ်ပြီးပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းတွေကို ပြန်လည်လက်ခံဖမ်းယူပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ Primary Radar များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၉၇) Secondary Surveillance Radar (SSR)
လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Secondary Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Primary Radar က ထောက်လှမ်းရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို ခွဲခြားစီစစ်မှုပြုလုပ်ပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အမြင့်စတဲ့ သီးခြား အချက်အလက်တွေကို ရယူဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဘက်မှာတော့ ဒီရေဒါတွေကို ရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားမှု စနစ်အတွက် အသုံးပြုပြီး IFF (Identification, Friend or Foe) လို့ခေါ်ပါတယ်။ IFF စနစ်များမှာ အမေးစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အမေးစက် (Interrogator) နဲ့ အဖြေစက် (Transponder) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာအမေးစက်ကနေပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ frequency ရှိတဲ့ pulse တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ အဖြေစက်က ၄င်း pulse များကိုလက်ခံရရှိတဲ့ အခါမှာ လက်ခံရရှိတဲ့ pulse ပေါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အဖြေ pulse တွေကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ် ပေးပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် အဖြေစက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရရှိပါတယ်။ IFF အကြောင်းကို ဒီမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5994.0.html)ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
(၉၈) Sector-Scanning Radar
360 ဒီဂရီထက်နည်းတဲ့ ညွှန်းရပ်အပိုင်းအခြားမှာပဲ လှည့်လည်ဖမ်းယူမှုပြုလုပ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်တွေရဲ့ ထိပ်ဖူးမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါတွေမှာ Mechanical rotation လုပ်ဖို့မလိုတဲ့ planner arrays ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Sector Scanner ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Sector Scanning Tracking Radar တစ်ခုမှ fan beam နှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ beam တစ်ခုက elevation အတွက်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ azimuth အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၉၉) Semiactive Radar
ပစ်မှတ်များကို ပိုမိုထင်ရှားစွာဖမ်းယူနိုင်ဖို့ အတွက် Transmitter နဲ့ receiver များကို တစ်နေရာစီ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Bi-static Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားကို လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးတွေရဲ့ အာရုံခံကိရိယာမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ Transmitter တပ်ဆင်ထားတဲ့ မြေပြင်စခန်းကနေဒုံးကို ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒုံးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အာရုံခံကိရိယာမှာ Receiver ပါရှိပါတယ်။ ပစ်မှတ်ကိုထိရိုက်ပြီးပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းတွေကို Receiver ကဖမ်းယူပြီး ပစ်မှတ်နောက်ကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ပါတယ်။ Semiactive Radar တွေဟာ Passive Radar တွေနဲ့မတူပါဘူး။ Passive Radar တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ်မှတ်ဆီက ပဲ့တင်လှိုင်း ဒါမှမဟုတ် ဖြာထွက်လှိုင်းတွေဟာ မြေပြင်မှာရှိတဲ့ ရေဒါက ထုတ်လွှင့်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။
Semiactive Radarအသုံးပြုထားသည့် HQ-16 ဒုံးလက်နက်စနစ်
(၁၀၀) Ship Borne Radar
ဒီရေဒါတွေကတော့ သင်္ဘောတွေပေါ်မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို လေကြောင်းအကဲကြည့်ထောက်လှမ်းခြင်း၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများမှာ လေယာဉ်ဆင်းသက်မှု ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ပစ်ခတ်မှု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း၊ ဒုံးထိန်းကျောင်း လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့ လမ်းကြောင်းပြခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Ship Borne Radar
(၁၀၁) Sidelooking Radar
လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Ground Mapping Radar အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ရဲ့ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ လေယာဉ်ရဲ့ ဝင်ရိုးနဲ့ ထောင့်မှန်ကျ ဒါမှမဟုတ် ဓားလွယ်ခုတ်သဏ္ဍာန် Beam တွေကိုပုံသေထုတ်လွှတ်ပြီး ထောက်လှမ်းကြည့်ရှုပါတယ်။ ဒီ beam တွေဟာ အများအားဖြင့် ထောင့်မှန် ဖမ်းယူတိုင်းတာလေ့ရှိပြီး ညွှန်းရပ်အနေနဲ့တော့ ကျဉ်းမြောင်းပါတယ်။ Sidelooking Radar တွေမှာ မြင့်မားတဲ့ cross-range resolution တွေကို ရရှိစေဖို့အတွက် Synthetic Aperture Radar နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ mapping ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအရ အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ Real Beam နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
Sidelooking Radar ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ပုံ
(၁၀၂) Single-Channel Radar
တိုင်းတာမှုပြင်ညီတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ ထောင့်တိုင်းတာမှုတွေကို တိုင်းတာရေး channel တစ်ခုထဲမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဟာ ခြေရာခံတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခြေရာခံခြင်း မပြုလုပ်ပေးတဲ့ ထောင့်အတိုင်းအတာရယူခြင်းများအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
(၁၀၃) Space-Based Radar (SBR)
အာကာသအခြေစိုက် ရေဒါမျိုးဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ SBR အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက Rendezvous Radar ဖြစ်ပြီး ထိန်းကျောင်းမှုစနစ်ရဲ့ အာရုံခံကိရိယာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Remote Sensing SBR ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်အနေအထား၊ အပင်များစိုက်ပျိုးထားရှိမှု စတာတွေကို တိုင်းတာထောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ Surveillance SBR ဖြစ်ပြီး ရွေ့လျားပစ်မှတ်တွေကို ထောက်လှမ်းဖို့နဲ့ ခြေရာခံဖို့အသုံးပြုပါတယ်။
Space-Based Radar (SBR)
Remote Sensing SBR
(၁၀၄) Space-Target Acquisition Radar
ကမ္ဘာပတ်ဂြိုလ်တုများနဲ့ Ballistics Missile များကို ရှာဖွေရန်၊ တည်နေရာဆုံးဖြတ်ရန်နဲ့ ခွဲခြားစီစစ်ရန် အသုံးပြုပြီး ကာကွယ်ရေးစနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေမှာ အောက်ပါသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိပါတယ်။
-	သေးငယ်တဲ့ပစ်မှတ်များကို ဝေးကွာတဲ့ အကွာအဝေးထိရှာဖွေနိုင်ခြင်း
-	လုပ်ငန်းပေါင်းစုံလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း (ဥပမာ-ရှာဖွေခြင်း၊ တည်နေရာတိုင်းတာခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနဲ့ ပစ်မှတ်ခွဲခြားစီစစ်ခြင်းတို့ကို ရေဒါတစ်ခုထဲက လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း)
-	Channel များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း (ပစ်မှတ်အရေအတွက်အမြောက်အမြားကို တစ်ပြိုင်ထဲ ထောက်လှမ်းဖမ်းယူ ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်)
-	အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း (ပစ်မှတ်ခွဲခြားစီစစ်မှုအတွက် လှိုင်းပုံစံအများအပြားကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)
-	ရေဒါအချက်အလက်တွက်ချက်စီစစ်မှုအတွက် မြင့်မားတဲ့ Mulitprocessor အစိတ်အပိုင်းကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်)
Space-Target Acquisition Radar တွေကို အသုံးပြုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားတွေ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Missile Warning Radar (MWR), Anitballistics Missile Defense Radar (ABM), Spacetrack Radar (STR) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
AN/FPS-50 BMEWS Anitballistics Missile Defense Radar (ABM) ရေဒါစနစ်
Raytheon Missile Warning Radar (MWR)
PAVE PAWS MWR
(၁၀၅) Space-Target Detection Radar
တာဝေးပစ် Ballistics Missiles များနဲ့ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဂြိုလ်တုတွေကို ဖမ်းယူဖို့ အသုံးပြုတဲ့ စွမ်းအားမြင့် ရှာဖွေရေးရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းနိုင်တဲ့အကွာအဝေးဟာ ကီလိုမီတာ ထောင်ပေါင်းများစွာအထိရှိပြီး RCS (Radar Cross Section) 1m2 နဲ့ ၎င်းထက်ငယ်တဲ့ပစ်မှတ်များကို ဖမ်းယူထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။
AN/FPS-108 Cobra Dane Space-Target Detection Radar
AN/SPQ-11 Cobra Judy Space-Target Detection Radar
(၁၀၆) Spacecraft Landing Support Radar
အာကာသယာဉ်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာ အမြင့်နဲ့ အလျင်နှုန်းတို့ကို တိုင်းတာဖို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေဒါဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်နဲ့နီးကပ်စွာ ဆင်းသက်နေတဲ့အချိန်မှာ အလျင်နှုန်းကို တိုင်းတာဖို့အတွက် CW လှိုင်းကို အသုံးပြုပြီး အမြင့်ကို တိုင်းတာဖို့အတွက်တော့ FMCW လှိုင်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အပိုလိုအာကာသယာဉ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ရေဒါမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါရဲ့အချက်အလက်တွေကို အောက်ပါဇယားမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၁၀၇) Stacked-beam Radar
တူညီတဲ့ ညွှန်းရပ်အတွင်း မတူညီတဲ့ နိမ့်မြင့်ထောင့်မှာ beam တစ်ခုထက်ပိုပြီး တပြိုင်တည်းထုတ်လွှတ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ beam တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိစပ်နေတတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ ထပ်နေပါတယ်။ Stacked beam တစ်ခုစီဟာ သီးခြား receiver များနဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
(၁၀၈) Subsurface Radar
ကြားခံအရာဝတ္ထုတွေကို ရေဒါနည်းပညာနဲ့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါနည်းပညာဟာ နက်ရှိုင်းစွာ ပူးဆက်နေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ထောက်လှမ်းခြင်း၊ အလွှာတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ ကြားအလွှာအဆင့်ဆင့်ကိုတိုင်းတာခြင်းတို့ကိုသာမက ကြားခံရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုင်ရာနဲ့ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာတို့ကိုပါ ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ Subsurface Radar တွေကို ကြားခံအရာဝတ္ထုအလွှာရဲ့ အထူကိုတိုင်းတာခြင်း (ဥပမာ-ကျောက်မီးသွေးအလွှာများ)၊ မြေအောက် ပိုက်လိုင်းများ၊ ကေဘယ်လ်ကြိုးများကို ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကို စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ လေယာဉ်တွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Subsurface Radar တွေကတော့ ရေခဲပြင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့ နေရာတွေကို ကင်းထောက်ခြင်းမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၎င်းအပြင် ရေခဲနဲ့ ဆီးနှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ မြေအောက်အဆောင်အဦများ၊ ဆီနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများကို ရှာဖွေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ကွင်းရှိ လေယာဉ်ဆင်းလမ်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များနဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမများရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ရှုပုံဖော်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
Shallow Subsurface Radar
Subsurface Radar Display
(၁၀၉) Surface Search (Surveillance) Radar
သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေပြင်ဒါမှမဟုတ် ရေပြင်ပိုင်နက်နယ်ပယ်အတွင်း အရာဝတ္ထုအများအပြားကို လှည့်ပတ်ဖမ်းယူထောက်လှမ်းဖို့ အသုံးပြုတဲ့ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေကြောင်းနဲ့ ရေကြောင်း လမ်းပြစနစ်များ၊ ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းခြင်းနဲ့ ခြေရာခံခြင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို တိုင်းတာခြင်းနဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် လေထုအခြေအနေများကို ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ လေယာဉ်တင် Surface Surveillance Radar တွေကို လမ်းကြောင်းပြစနစ်နဲ့ ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းခြေရာခံဖို့အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ မြေပြင်အခြေစိုက် Surface Surveillance Radar တွေကတော့ ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းခြေရာခံဖို့အတွက် အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ သင်္ဘောလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး စနစ်တွေအတွက်လည်း မြေပြင်အခြေစိုက်ရေဒါတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ရေကြောင်းသုံး Surface Surveillance Radar တွေကို သင်္ဘောများနဲ့ လေယာဉ်ငယ်လေးများကို လမ်းကြောင်းပြဖို့အတွက် အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အမြောက်များနဲ့ သင်္ဘောဖျက်ဒုံးများနဲ့လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အာကာသအခြေပြု Surface Surveillance Radar တွေကတော့ ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ရှိ အရင်းအမြစ်များထောက်လှမ်းဖို့အတွက် အဓိကအသုံးပြုပြီး စစ်ဘက်နဲ့ အခြားသတင်း ရယူထောက်လှမ်းရေးစနစ်တွေမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
RSR 940 Spider Surface Surveillance Radar
(၁၁၀) Surveillance Radar
လေယာဉ်ကွင်းပတ်ဝန်းကျင် ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ပျံသန်းရာလမ်းကြောင်းကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ထားသော လှုပ်ရှားသွားလာမှုဆိုင်ရာ အသိအမြင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အတွက် အသုံးပြုတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ASR-12 Airport Surveillance Radar
03-07-2010, 09:27 AM
(၁၁၁) Synthetic-Aperture Radar (SAR)
ပစ်မှတ်ဆီသို့ဦးတည်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Receiving signal ရဲ့ amplitude နဲ့ phase တို့ကို ပေါင်းစပ်စီစစ်တွက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ cross range impulse တုံ့ပြန်မှုတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ coherent radar စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြောင့်တိုင်းဦးတည်ရာပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီး အချက်အလက် စီစစ်တွက်ချက်ခြင်း (signal processing) နည်းလမ်းအရ synthetic aperture ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Focused နဲ့ Unfocused ဆိုပြီး Synthetic-Aperture Radar အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
3D Synthetic Aperture Radar စနစ်လုပ်ဆောင်မှုပြပုံ
(၁၁၂) Target Detection Radar
ဖမ်းယူရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ရဲ့ အချက်အလက်များကို Target Acquisition Radar, Fire Control Radar ဒါမှမဟုတ် Missile Guidance Radar တွေကိုပေးပို့ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
EL/M-2080 “Green Pine” Target Detection Radar System
(၁၁၃) Terminal Guidance Radar
ထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှုရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဒုံးမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အာရုံခံကိရိယာ ဒါမှမဟုတ် Missile-Guidance Radar သို့ ပစ်မှတ်ရဲ့ အချက်အလက်များကို ပေးပို့တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁၄) Terrain-Avoidance Radar
လေယာဉ်တင်ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မြေပြင်အတားအဆီးများနဲ့ ကပ်လျှက်ပျံသန်းတဲ့ အခါမျိုးမှာ မြေပြင်အခြေအနေ၊ အတားအဆီးများရဲ့ အခြေအနေများကို လေယာဉ်မှူးသိရှိနိုင်အောင် ထောက်လှမ်းဖော်ပြ ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁၅) Terrain-Following Radar
လေယာဉ်ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်ဆောင်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်ကနေ ကွန်တိုမျဉ်းအတိုင်း မြေမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အနိမ့်ပျံသန်းတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီရေဒါအမျိုးအစားဟာ လေယာဉ်ဦးတည်ရာမျက်နှာပြင်ကို အပိုင်းလိုက် scan လုပ်ပြီး မြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ အမြင့်ကို တိုင်းတာပေးပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံသန်းရာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အမြင့်နဲ့ အကွာအဝေးကိုလည်း တိုင်းတာဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။ Terrain-Following Radar တွေဟာ အများအားဖြင့် X-band နဲ့ Ku-band တွေမှာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Terrain-Following Radar စနစ်လုပ်ဆောင်ပုံ
(၁၁၆) Terrain-Observation Radar
လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားရှိပြီး ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်နဲ့ မြေပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ရေဒါပုံရိပ်များရရှိအောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁၇) Three-Dimensional (3D) Radar
ပစ်မှတ်ရဲ့ သုံးဘက်မြင်အတိုင်းအတာ တည်နေရာကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 3D Radar တွေရဲ့ လှည့်ပတ်ဖမ်းယူမှုနည်းလမ်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းက Pencil beam ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ညွှန်းရပ်တစ်ခုအတွင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်အထိ အထက်အောင်ပြောင်းလဲပြီး ဖမ်းယူတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
AN/TPS-59 solid-state, L-band, 3D radar
ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ ပတ်လည်ညွှန်းရပ်တစ်ခုလုံးမှာ Stacked beam ကိုအသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိမ့်မြင့်အတိုင်းအတာထိ အချက်အလက်ထောက်လှမ်းရယူတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Martello S 723, L-band radar
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိမ့်မြင့်အပိုင်းအခြားကို ခြုံငုံမိအောင် beam အများအပြားကို အပြိုင်ထုတ်လွှတ်စေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
AN/SPS-48 S-band, frequency-scanned, 3D radar
(၁၁၈) Tracking Radar
ပစ်မှတ်အား အလိုအလျောက်ခြေရာခံတဲ့အလုပ်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ Tracking Radar အမျိုးအစားတွေမှာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ pencil beam ရရှိစေဖို့အတွက် parabolic reflector ဒါမှမဟုတ် flat-plate array တွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ပစ်မှတ်အများအပြားဖမ်း ယူနိုင်တဲ့ ခေတ်ပေါ် ဘက်စုံသုံး Tracking Radar တွေမှာတော့ Electronically Scanning Phase Array Antenna တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် Tracking Radar အမျိုးအစားကတော့ Four-Coordinate-Tracking Radar ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်တည်နေရာ အတိုင်းအတာသုံးဘက်မြင်အပြင် ပစ်မှတ်ရဲ့ အလျင်နှုန်းကိုပါ တိုင်းတာခြေရာခံပေးပါတယ်။
Seawolf (အပေါ်ပုံ)တွင် တပ်ဆင်ထားသောType 911 fire control Target Tracking Radar
Doppler tracking ကိုအသုံးပြုထားသောCrotale NG Multi-Mission Air Defense Missile System
www.wikipedia.org ထဲရှာကြည့်လိုက်ပါ မတွေ့ရင် ကျွန်တော်ရှာပေးပါ့မယ်
(၁၁၉) Track-Via-Missile (Target-Via-Missile) Radar
Semiactive Seeker အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ signal များကို တွက်ချက်စီစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရေဒါဆီသို့ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် ထိန်းကြောင်းလမ်းညွှန်မှုအမိန့်ကို ရေဒါကွန်ပျူတာက တွက်ချက်ပြီး ဒုံးဆီသို့ချိတ်ဆက်ပေးပို့ပါတယ်။
Track-Via-Missile Radar စနစ်ကိုအသုံးပြုသော Patriot Missile စနစ်၏လုပ်ဆောင်ပုံ
(၁၂၀) Track-While-Scan (TWS) Radar
လှည့်ပတ်ဖမ်းယူရှာဖွေမှုကနေ ရရှိတဲ့ ပစ်မှတ်ရဲ့ ဗွီဒီယိုအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြနေတုန်းမှာပဲ အလိုအလျောက်ခြေရာခံမှုကို အင်တင်နာနဲ့ Receiver တို့က လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂၁) Two-Dimensional (2D) Radar
ညွှန်းရပ်ပြင်ညီ (သမားရိုးက လေကြောင်းရှာဖွေရေးရေဒါများ၌) နှင့် နိမ့်မြင့်ပြင်ညီ (အမြင့်ရှာရေဒါ) တို့မှာ မူသေ beam နဲ့ mechanically scan လုပ်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ရဲ့ ညွှန်းရပ်နဲ့အကွာအဝေး၊ ဒါမှမဟုတ် အမြင့်နဲ့အကွာအဝေး စတဲ့ နှစ်ဘက်မြင်အတိုင်းအတာများကို ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
2D နှင့် 3D ရေဒါများအားနှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်း
(၁၂၃) Ultrawideband (UWB) Radar
Signal bandwidth က centre frequency ရဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ UWB တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ waveform ကတော့ short impulses ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါတွေကို စစ်ဘက်နဲ့ အရပ်ဘက် နှစ်မျိုးစလုံးမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရပ်ဘက်သုံးအနေနဲ့ ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ အခြားမြှုပ်နှံထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ကြည့်ရှုထောက်လှမ်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ Ground penetrating radar အနေနဲ့လည်းကောင်း၊ သူခိုးဖမ်းစနစ်များနဲ့ အခြားသော ရှာဖွေရေးကိစ္စများမှာလည်းကောင်း အသုံးချကြပါတယ်။ စစ်ဘက်သုံးအနေနဲ့ တော့ Radar Cross Section (RCS) တိုင်းတာရေးနဲ့ ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းရေးတို့မှာ လိုအပ်သလို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီရေဒါကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ လှိုင်းတွေဟာ အခြားရေဒါလှိုင်းများအပေါ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မှုအတော်နည်းပါးပါတယ်။
HFSS-UWB radar စနစ်၏လုပ်ဆောင်ပုံ
Ground Penetrating Radar လုပ်ဆောင်ပုံ
Ground Penetrating Radar Display
(၁၂၄) V-beam Radar
မြေပြင်အခြေစိုက် သုံးဘက်မြင် (3D) ရေဒါစနစ်ဖြစ်ပြီး ပစ်မှတ်ရဲ့ အကွာအဝေး၊ ညွှန်းရပ်နဲ့ အမြင့် ဒါမှမဟုတ် နိမ့်မြင့်ထောင့်ကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ V-beam Radar တွေမှာ fan beam နှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပြီး တစ်ခုက vertical ဖြစ်ကာ နောက်တစ်ခုက inclined ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ beam နှစ်ခုဟာ တူညီတဲ့ ညွှန်းရပ်မျက်နှာပြင်အတိုင်း တစ်ပြိုင်နက်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ပစ်မှတ်ဆီက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ တုံ့ပြန်မှု နှစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အပေါ်မူတည်၍ ပစ်မှတ်ရဲ့ အကွာအဝေးနဲ့ အမြင့်တို့ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၂၅) Volumetric Radar
Search Radar, 3D Radar နဲ့ 2D Radar တို့ကို ပေါင်းစပ်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Radar volumetric cross-section of the Elbert County storm
(၁၂၆) Weather-Navigation Radar
ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး သွားလာရမယ့်လမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြပေးနိုင်တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Airborne-Weather-Avoidance Radar (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3261.msg27973.html#msg27973) အကြောင်းမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
(၁၂၇) Weapon Location Radar
လက်နက်ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး လက်နက်တည်နေရာကို တွက်ချက်ဖော်ပြတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Artillery and Motor Location Radar (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3261.msg28417.html#msg28417) အကြောင်းမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
The Artillery Hunting Radar (ARTHUR) Weapon Location System (WLS)
COBRA high mobility weapon location radar
Weapon Location Unit (WLU) တပ်ဆင်ထားသောTPQ-36/37 Radar Shelter များ
(၁၂၈) Wideband Radar
Signal bandwidth B ဟာ centre frequency f0 ရဲ့ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေဒါအများစုရဲ့ Transmitter, Receiver နဲ့ Antenna တို့မှာ RF အစိတ်အပိုင်းရဲ့ bandwidth ဟာ B&lt; f0 /10 သို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို Collision Avoid Radar (CAR) စနစ်များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Wideband Radar Design
ရေဒါမှာ DEAD AREA ဆိုတာလေး ရှိတယ် ဆိုတာ DICTIONARY ထဲမှာတွေ.တယ်။သိပ်နားမရှင်းဘူး။
နောက်ပြီး ရေဒါတိုင်းမှာ အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒါလေးပါ ကျေးဇူးပြု ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဗျာ။
အခုဆိုရင် ရေဒါအကြောင်းဆွေးနွေးလာခဲ့တာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခရီးပေါက်ခဲ့ပါပြီ။ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားများဟာလည်း အခုဆိုရင် ကုန်သလောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီထဲမှာမပါဝင်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများလည်း ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီရေဒါများဟာလည်း အထက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ရေဒါအမျိုးအစားတွေထဲက တစ်ခုခုနဲ့အကျုံးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း ရေဒါများကို အမျိုးအစားခွဲခြားရာမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ စံနှုန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ တစ်ချို့ကပုံသဏ္ဍာန်အရ၊ တစ်ချို့လုပ်ဆောင်မှုအရ၊ တစ်ချို့ကအသုံးပြုပုံအရ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီး နာမည်အမျိုးမျိုးပေးကာ အမျိုးအစားများခွဲခြားသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရေဒါတစ်မျိုးကိုညွှန်းဆိုလိုက်တိုင်း ၎င်းရေဒါဟာ အခြားရေဒါအမျိုးအစား နှစ်မျိုးသုံးမျိုးခန့်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒါအမျိုးအစားများကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်း အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်။ ရေဒါနည်းပညာနယ်ပယ်ကလူတွေအတွက်တော့ အများအားဖြင့် အထူးအဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီနည်းပညာနဲ့ အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးအနှုန်းတွေ မရှုပ်ထွေးရအောင်လို့ အတော်သတိပြုရပါတယ်။ ဒါတောင်မှ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရှုပ်ထွေးဝေဝါးနေပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဘာသာပြန်ရတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒီလို အခက်အခဲတွေရှိတာကတစ်ပိုင်း အချိန်အကြပ်အတည်းကတစ်ပိုင်းနဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေက ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ အခုအချိန်အထိ အသက်မဝင်တစ်ချက်ဝင်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အချိန်ပေးဖတ်ရှုကြတဲ့ ညီအစ်ကိုများကို အနူးအညွှတ်တောင်းပန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သမျှမှာ အယူအဆအမှားတွေ၊ အသုံးအနှုန်းအမှားတွေလည်း ပါနေဦးမှာပါပဲ။ ဒါတွေကိုလည်း နားလည်မှုပေးပြီး ဝိုင်းဝန်းပြုပြင်တည့်မတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ဝေဖန်တာ အကြံပြုတာ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးတာများကိုလည်း ဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုနေပါတယ်။
ရေဒါအကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေဒါအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုတော့ အတော်အတန်ဆွေးနွေးပြီးသွားပါပြီ.. ရေဒါကိုအခုမှ စလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တော့ တစ်ချို့အမျိုးအစားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုမိုအရေးကြီးတဲ့ ရေဒါအခြေခံများကို ဆွေးနွေးဖို့လိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆွေးနွေးချက်လေးတွေကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ ကိုဟိန်းညီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.... :applaus :applaus :applaus ( :4: အားမှန်းမအားမှန်းတော့မသိဘူး ပွဲသွင်းနေပြီ :4: :4:)
ကိုဟိန်းညီရဲ့ blog မှာဆွေးနွေးထားတာတွေလည်း အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုရမ်ရဲ့ စာမျက်နှာများပေါ်ကိုလည်း လာရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသော ရေဒါပညာရှင်များကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှအချိန်ပေးပြီး လာရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ... ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအတောအတွင်း သင်တန်းတစ်ခုတက်စရာရှိလို့ ထိထိရောက်ရောက် ဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ( :4: အဲ့လိုပဲ ရှောင်ထွက်ရမှာပဲ)
ကဲ ညီအစ်ကိုတို့ရေ ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွင်းကနေပြီး တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ ဆက်လက်အားဖြည့်ကြပါစို့လားဗျာ.... မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပညာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းမနိမ့်ပါးရအောင် ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်တွဲခေါ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်နည်းပညာဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင် ဒီဖိုရမ်ကနေစပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းမော်ကွန်းမျိုး ရေးထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူကများပြောဝံ့မှာလဲ... သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ဖိုရမ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေ တဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာကြတယ်။ အားနည်းနေတဲ့ ကဏ္ဍတွေကိုလည်း တတ်အားသရွေ့ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းနေကြတယ်.. ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချီတက်နေဆဲ.... MEF ကလည်း ခက်ဝေလတ်ဆတ်ဆဲ....
တွဲလက်တွေခိုင်ခိုင်မြဲနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ကြပါစို့လား....... နှုတ်ဖျားက သီချင်းစာသားတစ်ချို့အလိုအလိုရွတ်မိတယ်....
အတိအကျတော့ မဟုတ်ဘူးနော်... တတ်နိုင်သလောက်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ်...
ကျွန်တော်သိတာကတော့ ရေဒါများမှ ဖမ်းယူခြင်းမပြုနိုင်သော ဧရိယာကို radar blind zone လို့ခေါ်ပါတယ်... dead area ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ သိပ်မရင်းနီးဘူး တူတူပဲလို့တော့ထင်တာပဲ
radar blind zone က ရေဒါအမျိုးအစားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားပါတယ်...
Pulse ရေဒါတွေမှာဆိုရင် ပထမဦးစွာ pulse ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပစ်မှတ်ကို ထိရိုက်ပြီး ပဲ့တင်ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းကိုပြန်ဖမ်းယူပါတယ်။
pulse တွေကို ထုတ်လွှင့်နေတုန်းမှာဖမ်းယူမှုမပြုလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ pulse ရဲ့ duration ပေါ်မူတည်ပြီး ရေဒါမဖမ်းယူနိုင်တဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
pulse duration ကို ရေဒါလှိုင်းရဲ့ အလျင်နဲ့မြှောက်၊ ရတဲ့အဖြေကို တစ်ဝက်ဝက်လိုက်ရင် ရေဒါမဖမ်းယူနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကိုရရှိပါတယ်။ အကွာအဝေးတိုင်းတာပုံနဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲ။
ပတ်လည်ဖမ်းယူမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ ရေဒါကနေပြီး အဲ့ဒီအကွာအဝေးအထိ ပတ်လည်ဧရိယာက blind area ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက ရေဒါရဲ့ beam ပေါ်မူတည်တယ်။ အင်တင်နာရဲ့ vertical beam နဲ့ အင်တင်နာကို အထက်အောက် ကစားနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ရေဒါအပေါ်မှာ blind zone ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရေဒါအင်တင်နာကို အများဆုံးဘယ်လောက်ထိအပေါ်ထောင်နိုင်လဲ။ ထောင်ထားတဲ့အခြေအနေမှာ beam အကျယ်အရ ဘယ်လောက်ထိဖမ်းယူနိုင်လဲ။
ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီး blind zone ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဗျ...မျက်စိထဲမြင်ရဲ့လားမသိဘူး... ပုံဆွဲပြဖို့ကလည်းအဆင်မပြေလို့...
မှားတာရှိရင်လည်းပြင်ပေးကြပါဗျာ... ကိုးကားစရာလည်း လက်လှမ်းမမီလို့..
ရေဒါတိုင်းမှာတော့ အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်... အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲ ရေဒါအမျိုးအစားသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်.. ရေဒါနည်းပညာအသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်..
ဘယ်ရေဒါမှာ ဘယ်လိုအားနည်းချက်အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
အဆင်မပြေရင်လည်းပြောပါ ကိုဇင်မောင်ထွန်း :4: :4: ခေါ်ရတာတစ်မျိုးကြီး :4:
ုko William Paul ရေ...
ခုလိုဆွေးနွေးဖို့ အသိအမှတ်ပြုဖိတ်ခေါ်တာ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ :4: ဟီး။ ကျွန်တော်လဲနည်းနည်းတော့ပေါတယ်။ :4: :4: ကြိုဝန်ခံထားတာပါ။
ကျွန်တော် ko William Paul တင်တာတွေကိုဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ။ တော်တော်လည်းအသိပညာတိုးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀င်ဝင်ယူပြီးပြန်မပေးဖြစ်တာကြာတော့
ရှက်တော့ရှက်လာတယ်ဗျ။ :4: ဒီလိုပဲကြားကောင်းအောင်တော့ပြောရတာပဲ။ ဟဟား။ စာကကြည့်ရသေးတယ် ko William Paul ရေ.. မလုပ်ရင်ဆရာကတွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့။
ကျွန်တော်နိုင်သလောက်တော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ko William Paul လိုအရမ်း active မဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့တောင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ။
ပြတ်တလှည့်ငတ်တလှည့်နဲ့။ ko William Paul ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကိုရေ...
Tactical-technical characteristics of radar
ရေဒါ station တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲ၊ကိုယ်တိုင်တွက်ချက် တည်ဆောက်တော့မယ် ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူများနိုင်ငံက၀ယ်တော့ မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဦးဆုံးသိဖို့လိုတာ ကတော့ Tactical-technical characteristics of radar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် ရေဒါတစ်ခုရဲ့အရည်အချင်း စွမ်းပကားကိုသိချင်ရင်Tactical နဲ့ technical characteristics တွေကိုကြည့်ရလိုပါပဲ။ ဒီရေဒါက ဘယ်အပိုင်းအခြားအကွာဝေး(ဇုံ)အထိဖမ်းယူနိုင်တာလဲ၊ ဘယ်လောက်အလျင်မျိုးနဲ့လာတဲ့ အရာဝတ္တုမျိုးအထိဖမ်းနိုင်မလဲ အစရှိတာတွေကို အခု ကျွန်တော်ပြောမဲ့ characteristics တွေကဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမှ Tactical characteristics နဲ့ technical characteristics ဆိုပြီးနှစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်အရင် ရှင်းပါမယ်။ အဲဒါလေးကဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ရေဒါ station တစ်ခုရဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့တာဝန်ပေးပြီဆိုကြပါစို့။တာဝန်ပေးမယ့် သူက engineer ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသူပေးမယ့် အချက်အလက်တွေက တွက်ချက်မှူအပိုင်းမှာထည့်တွက်ရမယ့် data တွေကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တာဝန်ပေး မယ့်သူက ဘယ်လိုရေဒါမျိုးတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ သူဘာလုပ် ချင်တယ်ဆိုတာပဲပြောမှာပါ။
နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောပါမယ်။ computer တစ်လုံးဝယ်မယ် ဆိုကြပါစို့။ ၀ယ်မယ့်သူက computer အကြောင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင် သူကိုကျွန်တော်တို့ မေးဖို့လိုတာက ကွန်ပြူတာကိုသူဘာအတွက်အသုံးချမလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်တော့သူမှာရှိကိုရှိမယ်လေ။သူအနေနဲ့ဒါကိုပြောလည်းပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုပါစို့ရဲ့။သူက vedio editing လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့က graphic card ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဆင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ data တွေခပ်များများသိုလှောင်အသုံးပြု ချင်တယ်ဆိုရင်တော gigabyte များတဲ့ hard disk လေးသုံးပေးရမယ်မဟုတ်လားဗျာ။ဒီသဘောပါပဲ။အဲဒီတော့ တာဝန်ပေးမယ့်သူက ကျွန်တော်တို့ကို သူလိုချင်တာကို ပဲပြောလာမှာပါ။ ရေအောက်ကငါးအုပ်လိုက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသိချင်
တာလား၊ လေယဉ်ကြီးတွေကိုဖမ်းမှာလား၊ ပင်လယ်ရေပြင်အခြေအနေကိုသိချင်တာလား၊ မဇိုင်းဒုံး ကို ဂိုက်ဒက်လုပ်ချင်တာလား စသဖြင့် အစချီပြီး ဒဲ့ဒိုးကြီးတွေကစ်လာမှာပါ။ ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာထိ ဖမ်းနိုင်တာလိုချင်တာ.. အဲလိုမျိုးပေါ့။ အဲဒိ characteristics တွေကို Tactical characteristics လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒိကနေမှတဆင့် ကျွန်တော်တို့က technical characteristics တွေကိုပြောင်းယူတွက် ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tactical characteristics အကြောင်းနဲ့အရင်စလိုက်ကြရ အောင်ဗျာ။ဒီမှာ characteristics ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။
၁။ operating zone of radar
ဒါကတော့လေထုထဲကဧရိယာတစ်ခုပါ။ဘယ်လိုဧရိယာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရေဒါက အချိန်မလပ်စောင့်ကြည့်နေသော (သို့မဟုတ်) ရေဒါကလက်လှန်းမှီသော (သို့မဟုတ်) object ကိုဖမ်းယူနိုင်သော ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဧရိယာရဲ့အဝေးဆုံးအနားစွန်းကို maximum distance (Rmax) နဲ့ပြပါတယ်။အနီးဆုံးအနားစွန်းကိုတော့minimum distance (Rmin) နဲ့ပြပါတယ်။အနီးဆုံးဘယ်လောက်ကီလိုမီတာကနေ အဝေးဆုံးဘယ်လောက် ကီလိုမီတာအတွင်းမှာဒီရေဒါကဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒီဧရိယာကိုပြောဖို့က ဒီလောက် နဲ့တင်မလုံလောက်သေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကလေထု space ထဲက ဧရိယာကိုပြောမှာဆိုတော့ နောက်ထက် parameters တွေလိုပါသေးတယ်။အဲဒါတွေက တော့ azimuth (ရေပြင်ညီအတိုင်း မြောက်အရပ်မှစတင်၍ နာရီလက်တံအတိုင်း တိုင်းတာ သောထောင့် ) နဲ့ angle of elevation (အမြင့်အားဖြင့် မိမိတည်နေရာမှတိုင်းတာလို သည့်အရာဝတ္ထုသို့ ဒေါင်လိုက်တိုင်းတာသောထောင့်) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းမှာ range resolution , velocity resolution , angular resolution ဆိုပြီးသုံးပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။အကယ်၍ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဟာ angular position တူမယ်၊ တူညီတဲ့အလျင်နဲ့ ရွေ့လျားပျံသန်းလာမယ် ဆိုရင် radar မှာနှစ်ခု အနေနဲ့မြင်ဖို့အတွက် အဲဒီ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခု အနည်းဆုံးကွာဝေးရမယ့် အကွာအဝေးကို range resolution လို့ ခေါ်ပါတယ်။ΔR နဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အကွားအဝေးထက်ပို၍နီးကပ်စွာရွေ့လျား ပျံသန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ radar မှာနှစ်ခုအနေနဲ့မမြင်တော့ပဲ တစ်ခုထဲပဲလို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။အလားတူစွာပဲ အကယ်၍ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဟာ angular position တူမယ်၊ တူညီတဲ့အကွာအဝေးကနေရွေ့လျားပျံသန်းလာမယ်ဆိုရင် radar မှာနှစ်ခု အနေနဲ့ register လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုရဲ့အလျင်ဟာ အနည်းဆုံးခြားနားရမယ့် တန်ဖိုးကို velocity resolution လို့ခေါ်ပါတယ်။ ΔV နဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အလားတူစွာ အကယ်၍သာ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဟာအကွားအဝေးတူမယ်၊ တူညီတဲ့အလျင်နဲ့ ရွေ့လျား ပျံသန်းလာမယ် ဆိုရင် radar မှာနှစ်ခု အနေနဲ့ register လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီ့အရာဝတ္ထု နှစ်ခုရဲ့ angular position ဟာအနည်းဆုံးခြားနားရမယ့် တန်ဖိုးကို angular resolution လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ရေဒါကနေအလိုအလျောက် noise level တစ်ခုကိုကာကွယ်ရမဲ့ characteristic ပါ။ဥပမာ-မိုးများတဲ့ဒေသတွေမှာ မိုးရွာနေစဉ်မှာဖြစ်လာမဲ့မိုးစက်လေးတွေကိုရိုက်ပြီးပြန် လာမဲ့ signal ဟာ မိမိတို့ဖမ်းယူမဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့မရောထွေးအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရ ပါမယ်။ဒီလို noise မျိုးကိုတော့ကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးလျော့ချထားပါတယ်။
၄။ noise stability
မှားယွင်းမှူတွေရဲ့ ဘယ်လောက် stable ဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ parameters တွေပါ။ အရာ ၀တ္ထုတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ correct detecting probability(D)နဲ့ false alarm (F) ၊ တိကျမှူကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ potential accuracy ( σ ) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါက ဒီရေဒါမှာဘယ်လောက် channel လဲဆိုတာပါပဲ။တစ်ချိန် ထဲမှာ အရာဝတ္ထုဘယ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်းဖမ်းနိုင်သလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒါကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်သလို အရေးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေဒါအတွက် ငွေဘယ် လောက်သုံးမလဲပေါ့ဗျာ။
Technical characteristics မှာ အရေးကြီးတဲ့ characteristics (၇) ခု (ကျွန်တော်သိသလောက် :D ) ရှိပါတယ်။
၁။ detecting လုပ်မဲ့ရေဒါအမျိုးအစား
ရေဒါအမျိုးအစား။ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပြီး ကျွန်တော်တို့ system မှာ ဘယ်လိုရေဒါအမျိုးအစားကိုသုံးမလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ရမှာပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ရေဒါအမျိုးအစားဘာသိပ်မရှိလှပါဘူး။အမျိုးအစား (၃) မျိုးပဲရှိပါတယ်။
(၁) active ရေဒါ
(၂) active with active object ရေဒါ
(၃) passive ရေဒါ
အဲအမျိုးအစားတွေအကြောင်းထပ်သိလိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဘလော့ဒ်မှာရေးထားတဲ့ ရေဒါအမျိုးအစား http://mmradar.mmgenius.com/?p=58 ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
၂။ radiated signal ရဲ့အမျိုးအစား
လွှင့်ထုတ်မယ့် ၊ ဖမ်းယူမဲ့ radiated signal ရဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် continuous signal ကိုသုံးမလား၊ impulse signal ကိုသုံးမလား ဆိုတာ မျိုး ပေါ့။
၃။ wavelength (λ)
အသုံးပြုမဲ့ signal ရဲ့လှိူင်းအလျားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ bandwith ရွေးချယ်ခြင်း လို့ပြောရင်လည်းတူတူပါပဲ။ λ=c/f ကိုး။ c ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အလင်းရဲ့အလျင် ပါပဲ။များသောအားဖြင့်တော့ လှိူင်းအလျားကို ၈ မီလီမီတာကနေ ၃၀ စင်တီမီတာအတွင်း မှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ frequency ကိုတော့ ၁ ဂစ်ဂါဟာ့စ် ကနေ ၃၀ ဂစ်ဂါဟာ့စ် အတွင်းမှာ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
၄။ transmitter ရဲ့ power
သူကလည်း အဓိကကျတဲ့ factor ဖြစ်ပါတယ်။ coefficient တွေသုံးလေးငါးခုနဲ့တွက်ထုတ် ရပါတယ်။ coefficient တွေကိုပါရှင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူတို့ကိုလေ့ လာနေတုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်တာကိုနားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။
၅။ modulation အမျိုးအစားနဲ့သူ၏ parameters များ
System မှာသုံးမဲ့ modulation အမျိုးအစားပါပဲ။ system ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။ parameters တွေကတော့ pulse duration , spectrum width ∆fc , typematic period အစရှိသည်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Antenna ရဲ့ parameter များနှင့်သူ၏ characteristics များ
Tactical characteristics မှာတော့ azimuth α နဲ့ angle of elevation β တို့အကြောင်း ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာက antenna radiation pattern ရဲ့ azimuth အရအကျယ်ရယ်၊ angle of elevation အရအကျယ်ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။azimuth အရအကျယ်ကို ∆α=λ/dα နဲ့တွက်ထုတ်ပြီး angle of elevation အရအကျယ်ကိုတော့ ∆β=λ/dβ ဆိုတဲ့ဖော်မြူလာနဲ့တွက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ dα ဆိုတာကတော့ antenna ရဲ့ အလျားဖြစ်ပြီး dβ ကတော့ antenna ရဲ့ အနံပါ။ဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်ခြင်းအားဖြင့် geometrical area of antenna Sgeo ကိုရရှိပါတယ်။
ဘယ်လို receiver မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ဘယ်လောက်ထိ noise ကင်းဆင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် white noise လို့ခေါ်တဲ့ niose တစ်မျိုးကတော့ရှိစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ့အပြင် သဘာဝအတားအဆီးတွေဖြစ်တဲ့ မိုး၊နှင်း၊လှိုင်း၊သစ်ပင်၊တောင်၊အဆောင်အဦးများ အစ ရှိတဲ့ noise တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုဘယ်လို filtration လုပ်မလဲ ဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါတယ်။